မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး တောင်းဆို
ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားနေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ စုပေါင်းပြီး အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ရရှိရေး ချီတက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့အနီး စမွတ်စခွန်ခရိုင် မဟာချိုင်ဒေသမှာ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး အလုပ်သမားတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေကို မဟာချိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
DSCF3950တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်က ဒီဗွီဘီကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာအလုပ်သမားရော၊ ထိုင်းအလုပ်သမားတွေပါ လူသားချင်းအတူတူ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခွင့်အရေးတွေကို တန်းတူညီမျှ ရရှိဖို့ ထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ်။ တရားဝင် အလုပ်သမားတွေ ဟာ အခွင့်အရေးမရတဲ့အပြင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အတင်းအဓမ္မ ငွေညှစ်တောင်းခံတာတွေရှိတဲ့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။”
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ အိမ်ဖော်လုပ်ငန်းက အလုပ်သမားတွေကို တခြား အလုပ်သမားတွေနဲ့ တန်းတူ အလုပ်သမားဥပဒေနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့၊ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ သူတို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရေး၊ အမိမြေမှာ ပြန်ပြီး လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ မူဝါဒချမှတ်ပေးရေးတွေလည်း တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မဟာချိုင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့ ချီတက်ပွဲကို ထိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့က ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ၅၀ ကျော်ကလည်း ဒီနေ့မနက်က ခရိုင်အစိုးရရုံးကို သွားရောက်ပြီး အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်တွေ တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ နန်းဆိုင်ငင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“လက်မှတ်လုပ်ကြေးတွေ လျှော့ချပေးဖို့၊ ပွဲစားတွေမရှိဖို့၊ ကျန်းမာရေး အာမခံကိစ္စ၊ လူမှုဖူလှုံရေး ကိစ္စတွေမှာ အလုပ်သမားတိုင်း တန်းတူလုပ်ခွင့်ရဖို့၊ အမ်အိုယူ (နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်) နဲ့ လာတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ရှင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးလွယ်ကူစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ အလုပ်ရှင် ရှာဖွေပေးဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။”
အလုပ်သမားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ခရိုင်ဝန်ကိုယ်စား လက်ထောက်ခရိုင်ဝင်က လာရောက်လက်ခံပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ချင်းမိုင်ရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ဒီညနေပိုင်းမှာလည်း ၀ပ်ကူတောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မက်ဖောင်ဒေးရှင်းက ဦးဆောင်ကျင်းပမယ့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့ အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ္ဂညီလာခံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ သန်းလောက် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အုပ်ထားရုံနဲ့ ပုပ်ပွနေတာတွေက ရှင်းလင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူး
အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗို (ဓာတ်ပုံ – မြတ်သူအောင် / ဧရာဝတီ)
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုဟု ဆိုလိုက်လျှင် ဇာတ်ကောင်စရိုက်တိုင်း၌ တမူထူးခြားစွာ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်သူ၊ အကယ်ဒမီ မင်းသမီး၊ တကိုယ်တော် ရှိုးများတွင် အသံနှင့် တင်ဆက်မှုအားကောင်းသော အမျိုးသမီး အဆိုကျော် တဦးအဖြစ် အားလုံးသိပြီး ဖြစ်သည်။
သူ့ကို လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၂၀ နီးပါးက မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်းနှင့် ရိုက်ကူးထားသည့် “အဆိပ်ပြင်းသည်” ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်း၌ ထူးခြားသော သရုပ်မှုများဖြင့် ပရိသတ်များက စတင် သတိပြုခဲ့မိကြသည်။ မင်းသား လွင်မိုး ထုတ်လုပ်ပြီး ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားသည့် စာရေးဆရာမ ဂျူး၏ “ပင်လယ်နှင့်တူသော မိန်းမများ” ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားသော “တခါက ဧရာဝတီ ညများ” ဆိုသည့် ရုပ်ရှင်ကားကြီး တွင်တော့ ဝါဒတခုအတွက် အချစ်နှင့် အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရန် ဝန်မလေးသူ၊ ခေါင်းမာသော အမျိုးသမီး တဦးအဖြစ် ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သီချင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သူ၏ “1999” ဆိုသော စီးရီးက အမျိုးသမီး အဆိုတော်လောကအတွက် တကိုယ်တော် “ပေါက်” ခွေအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။ “ကိုယ်တို့ဝေးနေ … မိုင်ပေါင်းကဋေ” ဆိုသည့် သူ၏ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ သီဆိုသံကိုလည်း သူ့ပရိသတ်များက ဘယ်အချိန်ကြားလိုက် ကြားလိုက် နားစွင့်မိနေ ဦးမည် ဖြစ်၏။
ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အဖွဲ့ဝင် တဦးအဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေပြီး နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ လူသိထင်ရှား အမျိုးသမီးတဦးလည်း ဖြစ်နေရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် သူ၏ ဇာတိ မိုးကုတ်မြို့မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ပါဝင် အရွေးချယ်ခံရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း ခံရသူလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သူက ပါတီနိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း၊ လတ်တလော အခြေအနေအရ ပါတီတခုကို ပြင်ပမှ ကူညီအားဖြည့်ရန်သာ အားသန်သည်ဟု ဆိုလာသည်။
“ကျမတို့ မိုးကုတ်မြို့နယ်က ကမ်းလှမ်းတာ ရှိပါတယ်။ ကျမ စဉ်းစားတာက ပါတီထဲမှာ ၀င်ပြီးလုပ်တာထက် အပြင်မှာ နိုင်သလောက်ကူတာက ပိုပြီး ကူညီနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ကျမပါတီထဲ ရောက်သွားရင် ပါတီအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရည် အချင်းတွေ ပြန်ဖြည့်ဆည်းရမယ့် အချိန်တွေရှိမယ်။ အချိန်တွေအများကြီး ပေးရမှာရှိမယ်။ကျမ မိသားစုကိုလည်း ပစ်မထားနိုင်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် အပြင်ကနေ ကူနိုင်သလောက် ကူနေတာက ကျမအတွက် ပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်” ဟု ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ပြောသည်။
သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားအားကျသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ မိသားစု အရေးကို လျစ်လျှူရှုကာ အနစ်နာခံ၍ ပါတီနိုင်ငံရေး လုပ်ရန် မစဉ်းစားနိုင်သေးသူ ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ် အနေအထားအရ သူ့ကိုယ်သူ ပါတီ နိုင်ငံရေး လုပ်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသူ တဦးဟုလည်း ယုံကြည်မှု မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“ကျမက သွားလည်း သွားသေးတယ်၊ မပြတ်လည်း မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်မိမယ့် အတူတူ ကျမ တကယ် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်နိုင်တာကိုတော့ အရင်လုပ်နေတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ မသိဘူး။ ဒါကတော့ လောလောဆယ် အနေအထားပေါ့။ အခြေအနေဆိုတာ အများကြီး ပြောင်းလဲနေ တာတွေ ရှိပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ သူက အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လေးစားသူ ဖြစ်သည်။ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို “အမေစု” ဟု ခေါ်ဝေါ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီအတွက်သာ လုပ်မည်ဟု ပြောသည်။
“အမေစုက တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လုပ်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမတို့ အမေ့ကို ကူခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အလုပ်အကျွေး ပြုခြင်းနဲ့ အတူတူပဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ဆိုသည်။
ယခင်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရသေးသည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ မလွတ်မြောက် သေးချိန် ကာလတွင် နအဖ အစိုးရ၏ ဖိအားကြောင့် ဖြစ်စေ၊ တစုံတရာသော အကျိုးရလဒ်ကြောင့် ဖြစ်စေ အစိုးရ ပေါ်လစီဇာတ်ကားများတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ကြရသူများ၊ ပေါ်လစီသီချင်းများ သီဆိုသူများ ရှိကြသော်လည်း ထိုသူ များထဲမှပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာချိန်၌ ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံသည့် အနုပညာရှင်များစွာ ရှိသည်။ ထိုသို့သော အနုပညာရှင်များကို “သာကူးများ” ဟုဆိုကာ ဝေဖန်သူများလည်း ရှိကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက် အနုပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ချိန်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံသူများထဲ၌ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလည်း တဦးအပါအဝင် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ပရိသတ် ဝေဖန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီကမေးမြန်းရာ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက“လူကတော့ အမျိုးမျိုး မြင်နိုင်တာပေါ့၊ နောက်တခုက အမေစုကို တွေ့ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာတောင် မလိုက်ရဲတဲ့ သူတွေ ရှိသေးတုန်းပဲ။ ဒီနေ့အထိလည်း အမေစုနဲ့ မတွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေ ရှိသေးတုန်းပဲ။ ဒါက အရင်ခေတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ အကြောက်တရားတွေ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် သွားမတွေ့ရဲတဲ့ ကိစ္စတွေ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ နောက်တခုက အမေစုသာ အခုပြန်အဖမ်းခံရရင် တချို့က ထွက်ပြေးချင်လည်း ပြေးမှာပဲလေ။ ဒါက သဘာဝတရားအနေနဲ့ ကျမတို့ လက်ခံရမှာပဲ။ ကျမပြောတာက နိုင်ငံရေးကို တကယ် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို လုပ်လာတဲ့ သူတွေကို ကျမကြိုဆိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့မှ စိတ်ပါသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကိုယ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ လုပ်ပေမယ့် နားလည်းမလည်ဘူး၊ ဘာမှလည်း မသိဘူး။ တကယ်လုပ်နေရင်းနဲ့မှ တကယ် နားလည်လာတော့ သူ့စိတ်ဓာတ်တွေ အများကြီး ပြောင်းလဲ သွားနိုင်တယ်။ လုံးဝမလုပ်တာထက် စာရင် သာတယ်လို့ပဲ ကျမပြောချင်တယ်” ဟု ပြန်ဖြေသည်။
အသက် ၄၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုသည် မင်းသားဈေးကွက်သာ ရှိသော မြန်မာပြည်ရုပ်ရှင်လော၌ သူ့အတွက် ဇာတ်ရုပ် ရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲလာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အပိုင်းကို ခေတ္တ ရပ်နားထားကာ ဘာသာစကား သင်တန်းတက်ခြင်း၊ တခြား ပညာရပ် အမျိုးမျိုးကို လေ့လာခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ မိသားစု ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည် ဖြင့်သာ သူ့အချိန်များကို ကုန်ဆုံး စေသည်။ ပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူခြင်းက မိသားစုအတွက်ကော၊ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ အကျိုးရှိသည်ဟု သူက ယူဆသည်။
ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ် သူ့အမြင်ကတော့ ယခင်ထက် အနည်းငယ် လွတ်လပ်ပွင့်လင်း လာသည်မှ လွဲ၍ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲလာသည်ကို မတွေ့သေးဟု ဆိုသည်။
“ကျမတို့က ခေတ်တခေတ် ပြောင်းပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီကို သွားမယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အားလုံးက ရှိနေတာပေါ့နော်။ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာလည်း ကွဲလွဲနေတာတော့ အများကြီးပဲ။ အဆင်မပြေသေးတာ တွေလည်း အများကြီးရှိတာပေါ့။ နည်းနည်း ပါးပါးလေး ပြောခွင့်ဆိုခွင့် ရလာတာရယ်၊ လွတ်လပ် တာလေးက လွဲရင် တခြားကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲတာတော့ဘာမှ မတွေ့ရသေးပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
သူ့အနေဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ခြုံငုံ မသုံးသပ်နိုင်သေးသော်လည်း လက်ရှိ အစိုးရသစ်အနေဖြင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အားလုံး၏ စားဝတ်နေရေးကို မည်သို့ ဖြေရှင်းပေးမလဲ ဆိုသည်ကို စိတ်ဝင်စားနေသူ ဖြစ်သည်။
သူက ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်များ ကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းကြောင်း၊ အချိန်မကြာကြာအောင် ဆွဲနေသကဲ့သို့ ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သည်။
“ဥပမာ – မြို့နယ်တခုက မီးမရတဲ့ ကိစ္စကို တယောက်က ထဆွေးနွေးတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ နောက်တယောက်က တခြား မြို့နယ်တခုက မီးမရတာကို ပြောတယ်။ မီးမရတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုထဲမှာပဲ အဲဒါကို ဆွေးနွေးလိုက်ရင် အချိန်လည်း သက်သာမယ်။ ပိုလည်း အကျိုးရှိနိုင်မယ်။အချိန် မကြာကြာအောင် ဆွဲနေသလိုပဲ။ တကယ် လွှတ်တော်တက်နေရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေတော့ ဘယ်လိုနေသလဲ မသိဘူး။ အိမ်မှာဇိမ်နဲ့ ကြည့်ရတဲ့ ကျမတို့တောင် တော်တော်ပျင်းတယ်” ဟု ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ဆိုသည်။
လွှတ်တော်ထဲတွင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေသည့် အချက်ကိုလည်း သူက လက်မခံနိုင်ဟု ဆက်ပြောသည်။
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ကားများထဲ၌ သရုပ်ဆောင်ရာတွင် အများသောအားဖြင့် ထက်မြက်သော မိန်းမ တဦးအဖြစ် တွေ့ရတတ်သော ထွန်းအိန္ဒြာဗိုကို ယခုအချိန်၌ သူနေထိုင်ရာ FMI အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ နေအိမ်တွင် တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်ပြီး ပညာရည် ပြည့်ဝသော လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတဦးအဖြစ် တွေ့ရသည်။ သူက အိမ်ထောင်တခုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား တန်းတူ တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးသူဟု သိရသည်။
“ကျမကတော့ လူဆိုရင် လူသားတယောက် အနေနဲ့ပဲ လက်ခံချင်တယ်။ အဲဒီလူရဲ့ အရည်အချင်းပေါ်မှာပဲ ဆုံးဖြတ် ချင်ပါတယ်။ ယောက်ျားမို့လို့ ဘာဖြစ်ရမယ်၊ မိန်းမမို့လို့ ဘာဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးတော့ ကျမသိပ်မကြိုက်ဘူး။ ကျမတို့ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမဆိုပြီး လက်မခံဘူး။ ဒီအိမ်ထောင်တခုမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်သူဘယ်လို တာဝန်ယူပြီး ခွဲခြမ်းလုပ်ကိုင်နေလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲ အိမ်ထောင်ရေးကို ပြေလည်အောင် တည်ဆောက်တယ်။ ကျမတို့ အိမ်ထောင်မှာ ယောက်ျား မိန်းမ မရှိသလိုဘဲ၊ တိုင်းပြည်မှာလည်း မရှိစေချင်ဘူး။ အရည်အချင်းနဲ့ပဲ သွားစေချင်တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပီပြင်ပြင်၊ ဇာတ်ရုပ်ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိသော ဇာတ်လမ်းများတွင် မင်းသမီးတလက် အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သော သူ့အတွက် ယခုအချိန်တွင် မင်းသားငယ်များဖြင့် အပျိုကြီး၊ အစ်မကြီး၊ အမေ၊ အဒေါ် စသော နေရာများတွင်သာ သရုပ်ဆောင်နေရခြင်းနှင့် ဇာတ်ရုပ်များထပ်လာခြင်း အပေါ် သူက စိတ်ပျက်လာသောကြောင့် သရုပ်ဆောင်သည့် အလုပ်များကို လျှော့ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက် ရုပ်ရှင် ဆင်ဆာခေတ်က ဆင်းရဲစုတ်ပြတ်နေသည့် အခန်းများ ပါဝင်သော ရုပ်ရှင်ကားများ မရိုက်ရန် တားမြစ်မှု အပေါ်လည်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ဝေဖန်သည်။ သူက မင်းသားကျော်ဟိန်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ မင်းသမီး စိုးမြတ်သူဇာတို့နှင့် တွဲဖက်၍ စာရေးဆရာမ ခင်ခင်ထူး၏ ဝတ္ထုကို ရိုက်ကူးထားသော “ကြိုးတန်း” အမည်ရှိ ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှ နှစ်စဉ် ပေါ်ထွန်းတတ်သည့် ရေပေါ်ကျွန်းကလေး တကျွန်းပေါ်တွင် ဆင်းရဲ စုတ်ပြတ်နေသည့် လင်မယား နှစ်စုံတွဲ၏ ခေတ္တ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရာ နေရာကို ကြိုးတန်းကာ သတ်မှတ်၍ ထိုနေရာ ကလေးအတွက် တဦးနှင့်တဦး ရန်ဖြစ်၊ စကားများ၊ မခေါ်မပြောနိုင် ဖြစ်ကြပုံကို သရုပ်ဖော် ထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ကြိုးတန်းဇာတ်ကားတွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ဆင်းရဲပြီး စရိုက်ကြမ်းသူ မိန်းမ တဦးအဖြစ် ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကား ဖြန့်ချိပြီးနောက်တွင် စစ်အစိုးရ လက်အောက်ရှိ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာက ဆင်းရဲလွန်းသည်ကို ဖော်ပြသော ဇာတ်ကားများ မရိုက်ရန် တားမြစ်ခဲ့သည်။
“ကျမတို့ခေတ်တုန်းက ဆင်းရဲခန်းတွေ မရိုက်ရဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ တကယ်ရှိတာကို ခွင့်မပြုခြင်းအားဖြင့် အရှိကိုအရှိအတိုင်း ရင်မဆိုင်ရဲဘူးလို့ ပေါ်နေတာပေါ့။ အဲဒါကြီးက ရှက်စရာလည်း ကောင်းတယ်၊ သဘာဝလည်း မကျဘူးလေ။ ပြီးတော့ နည်းလမ်းဖြေရှင်းစရာလည်း မရှိဘူး။ အပေါ်ကနေ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အုပ်ထားရုံနဲ့ ပုပ်ပွနေတာတွေက ရှင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူး” ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ပြောသည်။
တိုင်းပြည် ဆင်းရဲနေသည့် အရှိအရှိအတိုင်း မြင်ကွင်းများကြောင့် ပြည်သူလူထု စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရသည်ထက်၊ အစိုးရအနေဖြင့် အရှုံးခံလုပ်ဆောင် ပေးနေရကြောင်း မကြာခဏ ပြောနေခြင်းက ပိုမို စိတ်ဆင်းရဲရသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်ကဏ္ဍတွေကို အစိုးရက အရှုံးခံပြီး လုပ်နေရပါတယ်လို့သာ ပြောတာ၊ အဲဒီလို အရှုံးခံပြီး လုပ်နေတာကို ကျမတို့က မယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး၊ ယုံကြည်ပါတယ်။ သိပ်မြတ်တဲ့ ဟာတွေကျတော့ ဘာသံမှ မကြားရဘူး။ တိုင်းသူပြည်သားတွေ စိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ ကြိုမပြောဘူးဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတဲ့၊ သိပ်မြတ်တဲ့ ကဏ္ဍတွေ ချပြလေ။ ဘယ်လောက် ပျော်စရာကောင်းမလဲ။ ကျမဖြစ်စေချင်တာက ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ကဏ္ဍတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သစ်တော ကဏ္ဍ၊ သယံဇာတတွေ၊ အများကြီးမြတ်တဲ့ ကဏ္ဍတွေက တကယ်ရှုံးတဲ့ နေရာကို နည်းနည်း မျှဝေပေးရမယ်လေ။
ဆိုလိုချင်တာက ဋ္ဌာနဆိုင်ရာတွေက အရှုံးခံချင်ခံရမယ်၊ အစိုးရက အရှုံးမခံရဘူး။ အစိုးရ မရှုံးခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ မရှုံးတာနဲ့ အတူတူပဲ။ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူက တသားတည်း ကျနေတယ်။ သူက ရှုံးတာချည်းပဲ ကြားနေရတော့ စိတ်ဆင်းရဲရတာ၊ အဲဒါကမှစိတ်ဆင်းရဲရတာ။ မြတ်တာတွေပြောပြပါ၊ အရမ်းစိတ်ချမ်းသာချင်လို့ ကြားချင်ပါတယ်လို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေတယ်။ ကျမ ပြောတာက ဘာဖြစ်လို့ တကယ်ရှိတာကို ရင်မဆိုင်ရဲရတာလဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။
လက်ရှိသူက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးတွင် ဒါရိုက်တာ အိအိခိုင်နှင့်အတူ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင် တာဝန်ယူပေးနေသည်။ ထိုဇာတ်ကား၏ ဇာတ်ညွှန်းမှာ လုံးဝ ပြီးစီးပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ၂၀၁၄ တွင် စတင် ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်၌ အစစ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်းတို့ ပြီးသလောက် ဖြစ်နေပြီဟု ပြောပြသည်။ နိုင်ငံခြားမှ ဒါရိုက်တာကို ငှားရမ်းရိုက်ကူးမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော၊ မြန်မာမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ မှားယွင်းပျက်စီးပါက ပါဝင်စွက်ဖက်ခွင့်ရရေးကို ပြောဆို ထားသည်ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် ပါဝင်မည့်သူကို စစ်သင်တန်း တက်ခိုင်းထားကြောင်း၊ ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာမှ သရုပ်ဆောင်မည့် သူကို သူနာပြုသင်တန်း တက်ခိုင်းမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံရေးတွင် စိတ်ပါဝင်စားလာပြီဖြစ်သော ထွန်းအိန္ဒြာဗို အနေဖြင့် ၂၀၀၈ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း တိုက်ခတ်ပြီးချိန် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအကျပ် အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို “ပြင်ရမည်” ဆိုသည်ဘက်တွင် ရှိကြောင်း ပြောသည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ပြင်ကိုပြင်ရမယ့် အချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက နာဂစ်ဖြစ်တဲ့အချိန် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတုန်း ဇွတ်အတင်းကို အတည်ပြုထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ စေတနာဆိုတာ မှားတယ်လို့ကျမခံစားရတယ်” ဟု ထွန်းအိန္ဒြဗိုက ဆိုသည်။
သူက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်စေချင်သူ တဦးဖြစ် သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတ ဖြစ်လျှင် အလုံးစုံ ပြီးပြည့်စုံသွားမည်ဟု မပြောနိုင်သော် လည်း ယခုထက် ပိုကောင်းလာမည်ဟု ယုံကြည် သူလည်း ဖြစ်သည်။
“အမေစုဟာ ပညာတွေလည်း အများကြီးတတ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ နိုင်ငံတကာ ပညာအသိအမြင်၊အကြားအမြင် ဗဟုသုတရော၊ တကယ်ရဲစွမ်းသတ္တိရော၊ တကယ် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုတွေရော အရည်အချင်းတွေက ပြောလို့ မကုန်အောင် ပြောစရာစကား၊ တင်စားစရာ စကားလုံး မရှိလောက်အောင်ကို အများကြီး ပြည့်စုံတဲ့အတွက် အမေစုလို လူမျိုး သမ္မတမဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလူမျိုးကို တင်ချင်ကြသေးတာလဲ လို့ပဲ ကျမမေးရမယ်။ အမေစုလောက် သမ္မတ ဖြစ်သင့်တာ မရှိဘူးလို့ ကျမခံစားရတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ၁၀ နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးတိုးလာ
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု နှိမ်နင်းပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဟာ ၁၀ နှစ်ကျော်အတွင်း အမြင့်ဆုံးတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရုံး (ယူအန်အိုဒီစီ) က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရွှေတြိဂံဒေသရဲ့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို စစ်တမ်းပြုစုပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ ဘိန်းစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာမှာ ခုလို ဖော်ပြထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဟက်တာ ၅၁၀၀၀ ရှိရာက ၂၀၁၃ မှာ ဟက်တာ ၅၇၈၀၀ ထိ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာတယ်လို့ စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။
ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုဟာလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ တန်ချိန် ၈၇၀ လောက် ပိုထွက်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ယူအန်အိုဒီစီ နဲ့ မြန်မာအစိုးရ သဘောတူညီချက် ရယူခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကနေ ၁၁ နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံး ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်တယ်လို့လည်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်း၊ လာအို၊ မြန်မာနယ်စပ်က ရွှေတြိဂံဒေသ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဟာ ၇ နှစ်ဆက်တိုက် မြင့်တက်ခဲ့သလို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ လာအိုနဲ့ မြန်မာက ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၈၉၃ တန်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကထက် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တန်ချိန် ၃၂၆တန်ထက် ၂.၇ ဆ တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးတဲ့အခြေခံ အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ဘိန်းအစားထိုး စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စတွေ အလျင်အမြန် အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ လိုနေကြောင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြသလိုက်တာလို့ UNODCရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ဂျရမီဒေါက်ဂလပ်စ်က ပြောပါတယ်။
ရွှေတြိဂံဒေသဟာ မဲခေါင်ဒေသရဲ့ ပထ၀ီအနေ အထားအရ ဗဟိုကျတဲ့နေရာ ဖြစ်သလို အရှေ့တောင်အာရှ တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်မှုတွေက အကျိုးအမြတ်ရရှိထားတဲ့ ဒုစရိုက် ကွန်ရက်တွေက ဒေသတွင်း ပေါင်းစည်းမှုကို အကျိုးအမြတ်အဖြစ် အသုံးချနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ရဲမှူးချုပ်ဝင်းခေါင်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသလို ဖမ်းဆီးရမိတာကလည်း များနေပြီး ဘိန်းခင်း ဖျက်ဆီးတာတွေကိုလည်း အင်နဲ့အားနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် အစိုးရ လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“တိုးပွားလာတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ဥစ္စာကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လက်လှမ်းမမီတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတဲ့ အစွန်အဖျား ဒေသတွေမှာ ဘိန်းခင်းစိုက်ပျိုးမှုတွေ ဘိန်းလုပ်ငန်းတွေက တော်တော်များများကို ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကြောင့်မို့ ကျနော်တို့က တားဆီးနှိမ်နင်းရေးမှာ အရင်တုန်းကလို တနိုင်ငံတည်း ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘဲ ယူအန်အိုဒီစီ က ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။ အခြား ပြည်ပက မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိပြီး ဘက်ပေါင်းစုံက တိုက်ဖျက်ရေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ပါတယ်။”
မြန်မာနဲ့ လာအိုနိုင်ငံတွေမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြင့်တက်လာနေသလို ဘိန်းနဲ့ ဘိန်းဖြူ သုံးစွဲမှုတွေကလည်း မြင့်မားနေတယ်လို့ ယူအန်အိုဒီစီက ဆိုထားပါတယ်။
၁၉၇၀ လောက်မှာ မြန်မာကို ဘိန်းဖြူ စရောက်ပြီး သုံးစွဲသူများခဲ့သလို ၁၉၈၀-၈၈ ကာလမှာ ဘိန်းဖြူအန္တရာယ်တော်တော်များပေမယ့် နောက်ပိုင်း အသုံးပြုမှု နည်းသွားကြောင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ကြွရှုးသွပ်ဆေးပြား သုံးစွဲသူတွေ ပိုများလာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်ရေးအသင်းရဲ့ စီမံကိန်း အကြံပေး ဒေါက်တာ မောင်မောင်လွင်က ပြောပါတယ်။
“အခု ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ အပွင့်အလင်းဆုံးပြောရရင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအရကော ကျနော်တို့တွေက ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ ရိပ်မွန်တွေ ဖွင့်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘာတွေ တွေ့လာလည်းဆိုတော့ ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူတွေကိုလည်း အခုနှစ်ပိုင်းမှာ ပြန်တွေ့လာရပါတယ်။ သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေထဲမှာလည်း ဖမ်းဆီးရမိပြီး အရေးယူတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဘိန်းဖြူ၊ စိတ်ကြွဆေး၊ ဆေးခြောက် စသဖြင့် ပြန်တွေ့လာရတယ်။ သုံးစွဲတဲ့သူလည်း ပြန်ရှိလာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။”
အစာမလုံလောက်မှု၊ ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသက ရွာတွေအတွက် ဘိန်းကရတဲ့ ငွေကြေးဟာ လိုအပ်ချက် တခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုအရ သိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင် အာရှမှာ ဘိန်းအများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာတော့ အာဖဂန် နစ္စတန် ပြီးရင် ဒုတိယအများဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
NLD ခေါင်းဆောင်တွေ က ဒါကို အံ့အားသင့် သွားကြတယ်
ဘာတီးလင့် တနာ သည် ဆယ်စု နှစ် သုံးခု နီးပါး အာရှ အကြောင်း ဆောင်းပါးများ ရေးသား ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Far Eastern Economic Review အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သတင်းထောက် အဖြစ် လုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅-၁၉၈၇ ခုနှစ်များ တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် မြန်မာနယ်စပ်များသို့ ဇနီးဖြစ်သူ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူ နှင့်အတူ ခရီးကြမ်းကို သွားလာခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ဗမာပြည် ကွန်မြူနှစ် ပါတီ ခေါင်းဆောင်များအား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ထို့နောက် Burma in Revolt ၊ Rise and Fall of Burmesem Communism ကဲ့သို့သော နာမည်ကျော် စာအုပ်များကို ရေးသား ခဲ့သည်။ မြန်မာ့ အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တနာသည် နိုဝင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့က မန္တလေးတွင် ကျင်းပသည့် လူထု ဒေါ်အမာ မွေးနေ့ပွဲသို့ တက်ရောက် ခဲ့သည်။ ဘာတီးလင့်တနာ ရောက်ရှိ နေခိုက် နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့ တွင် မန္တလေးမြို့ လူထုစာကြည့်တိုက် တွင် မြန်မာ မီဒီယာသမားများ ဖြစ်သည့် ၀င်းဖေမောင် နှင့် စိုးကျော်သူတို့ မှ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ခဲ့သည်။ မြန်မာ-မြောက် ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ အရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သမ္မတဖြစ်နိုင်ခြေ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တွင် တပ်မတော် ၏ ကဏ္ဍ စသည်တို့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာတီးလင့်တနာ ၏ သုံးသပ်ချက်များ ကို ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဘာတီးရေ ခင်ဗျားနဲ့ တွေ့ရတာ သိပ်ကို အံသြစရာ ကောင်းပါတယ်။ ခင်ဗျား အကြောင်း ကို စာအုပ်တွေမှာ ဖတ်ဖူးတော့ လည်း သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း တယ်ဗျ။ ခင်ဗျားက ဂျာနယ်လစ်၊ စာရေး ဆရာ၊ ပြီးတော့ ခင်ဗျားက Asia Pacific Media Services အတွက် မဟာဗျူဟာပိုင်း ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ။
အဲဒါက ကျွန်တော့် ကုမ္ပဏီပဲ။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်လေးပါ။ သိပ်ပြီး မခမ်းနား ပါဘူး။
အော် ဟုတ်ကဲ့။ ခင်ဗျားက မြန်မာ၊ မြောက် ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်အကြောင်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ အများ ကြီး ရေးခဲ့ ပါတယ်။
ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာ က ခင်ဗျား ဟာ ၁၉၈၅ ကနေ ၈၇ အထိ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် အများစု ထိန်းချုပ် ထားတဲ့ မြန်မာ့နယ်စပ် နေရာ အတော် များကို သွားရောက် ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ကာလ တွေ မှာ ခင်ဗျားက ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်း တဲ့ ခရီးတွေ ဖြတ်သန်း ခဲ့ရတယ်ဗျာ။ အဲဒီမှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဗမာ ပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ ခင်ဗျား တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ကာလတွေမှာ ခင်ဗျား က ကြည်နူး ဖွယ် အချိန်တွေလည်း ကြုံတွေ့ ခဲ့မှာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခင်းဗျား ရဲ့ ချစ်သူ နဲ့ ဆုံတွေ့ ခဲ့လိုပါ။
မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ် တာ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ကတည်းက။ အဲဒီ မသွားခင် နှစ် နှစ်လောက်က တည်း ကပါ။
အော် ဆောရီး ဘာတီးရေ။ ဒါဆို ခင်ဗျား တို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် မြန်မာနယ်စပ် က ခရီးကြမ်းတွေ ကို အတူ ဖြတ်သန်း ခဲ့ ရတာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ နှစ်ဦးက မြန်မာ ပြည်ထဲ ၀င်ဖို့ အိန္ဒိယ နယ်စပ် ကနေ တိတ် တဆိတ်ဝင် လာခဲ့ တာလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လက်ထပ် ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက် ကျွန်တော်တို့ ခရီးရှည်ကြီး ကို အတူ သွားခဲ့ ပါတယ်။ ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပထမဆုံး ရင်သွေးလေး ကို သူ ကိုယ်ဝန် လွယ်တယ်။ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ သမီးလေးကို နာဂပြည်မှာ မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ နေမကောင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စစ်ကိုင်း အထက်ပိုင်း နာဂတောင်တန်းတွေ က ဖြတ်ပြီး ခရီးကြမ်း ကို သွားခဲ့တယ်။စစ်ကိုင်းတိုင်း ထဲကနေ ကျွန်တော်တို့ နာဂသူပုန် တွေ ထိန်းချုပ် ထားတဲ့ နေရာကို ဖြတ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် ကို သွားတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်နယ်စပ် ကို သွားပါ တယ်။ အဲဒါ ခြောက်လလောက် ကြာပါတယ်။
ခင်ဗျား ခရီးစဉ်က သိပ်ကို ကြမ်းတမ်း ခဲ့ မှာပေါ့ ဘာတီး။ ခင်ဗျား တစ်ခါတစ်ရံ ခြေလျင် လျှောက်ရမယ်၊ တစ်ခါတရံ ဆင်တွေပေါ် ကနေ သွားလာ ခဲ့ရမယ်။
ဟုတ်တာ ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ခရီးလမ်း က သိပ်ကိုကြမ်းတမ်း ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် လမ်းမလျှောက် နိုင်လို့ ဆင်စီးပြီး သွား ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ ချင်းတွင်းမြစ် ကို ဖြတ်ကျော် ခဲ့ရတယ်။ ဟိုပုန်း ဆိုတဲ့ ရွာလေးကို ရောက်တယ်။ အဲ့ဒီတုန်း က ဟိုပုန်းက ရွာလေး ပေါ့။ ကျွန်တော့် ခြေထောက်ကို မျှော့တွေ ၀ိုင်းတွယ်တယ်။ ခြေထောက်ကြီး ဘောလုံး လို ယောင်ကိုင်း လာပြီး ကျွန်တော် လမ်းဆက် မလျှောက်နိုင် တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ခြေထောက် ဒဏ်ရာ က ပိုးဝင် သွားတယ်။ ကျွန်တော် နှစ်ပတ် လောက် လမ်းမလျှောက် နိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ ဆင်နဲ့ ခရီးသွား ခဲ့ရတယ်။ အခု ချိန်ထိ ကျွန်တော် ခြေထောက် တစ်ဖက်က ဆာတာတာနဲ့။ အဲဒီ ဒဏ်တွေပေါ့။ ဆင်တွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့။ ဒီကောင်ကြီးတွေ က သိပ်လိမ္မာတာ။ ကျွန်တော် ဆင် အကြောင်း အဘိဓာန် တစ်အုပ်လောက် ရေးရင်တောင် ရ လောက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါ ချောင်ကို ရောက်တယ်။ အဲဒီ ၁၉၈၇ လောက် က မိုးတွင်းကြီးပေါ့။ အောက်တိုဘာ မိုးတွေသည်း နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက် ရတယ်။ အဲဒီမှာ ခြောက်လလောက်နေခဲ့တယ်။ ကွန် မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ပြီး တော့ တရုတ်ပြည်ကို သွားတယ်။ အဲဒီမှာ အဖမ်း ခံရတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ပို့ ပါတယ်။
ခင်ဗျား တရုတ်ပြည် မှာ သခင်ဗသိန်းတင်နဲ့ တွေ့ခဲ့ သေးလား။
တွေ့တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပန်ဆိုင်းမှာ တွေ့တာ။ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် အားလုံးနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သခင် ဗသိန်းတင်၊ သခင် ခင်မောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော်တို့နဲ့ တွေ့ခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော်နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ အေးဗျာ သူ ကတော့ မနှစ်ကပဲ ကွယ်လွန် သွားပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်။ သူက သိပ်ကို သဘောထား ပြည့် တဲ့ သူပါ။ သူ့မိသားစုနဲ့ ကျွန်တော် အခုချိန် အထိ အဆက် အသွယ် ရှိနေပါတယ်။
ခင်ဗျားပါ ချောင်မှာ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့လား။
၈၇ ရောက်တုန်း ကတော့ ကျွန်တော် မတွေ့ ခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန်း က ၈၈ အုံကကြွမှု မဖြစ် သေးဘူးလေ။ ၈၈ ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကျွန်တော့် မိန်းမရယ်၊ သမီးရယ်၊ ကျွန်တော် တို့ ယူနန်ကို သွားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ရွှေလီကို သွားခဲ့တယ်။ ရွှေလီမှာ ကျွန်တော်တို့ ABSDF ကျောင်း သား တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ က ကချင် ဒေသ ထဲမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် သတ်ဖြတ်မှုတွေ အကြောင်း ကြားခဲ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အရမ်းကို အံ့သြပြီး တုန်လှုပ် သွားခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ Far Eastern Economic Review မှာ ဝေဖန် ရေးသား ခဲ့ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ရေး သလဲ မေးကြ ပါတယ်။ အဲဒါ အမှန် တကယ် ဖြစ်ပျက် ခဲ့ လို့ပဲ။ ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှား တဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ် ခဲ့တာ သိပ်ကို ကြမ်းတမ်း ရက်စက် လွန်းပါတယ်။ ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ က ခက်ခဲ ပါတယ်။ အုပ်စု တော်တော် များများ က သူတို့ သဘောကျတဲ့ အရာ တွေကို ရေး စေချင်ပါတယ်။ တကယ် တော့ ဒီသတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေး သားဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူ ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ကာလတွေတုန်း က ခင်ဗျားက မြန်မာ အစိုးရ ရဲ့ အမည်ပျက် စာရင်းထဲ မှာ ပါခဲ့ တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း ကို တရားဝင် လာရောက်လို့ မရဘူး မဟုတ် လား။
တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ၁၉၈၉ မှာ ကျွန်တော် ဒီကို ရောက်လာ ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် တို့ ထိုင်း ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၇) ရက် မှာ ပြန်ရောက် ခဲ့တယ်။ မတ်လ ၈၈ မှာ ဆန္ဒပြပွဲ တွေ စတင် ဖြစ်ပွားတယ်။ နောက် သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလ မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အုံကြွမှု တွေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒါ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး Far Eastern Economic Review အတွက် သတင်းတွေ ရေးပေး ခဲ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် က ဘီဘီစီ အတွက် အလုပ် မလုပ်ပေမယ့် ကျွန်တော် ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ကို ဘီဘီစီ က ဘာသာပြန် ထုတ်လုပ် ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ကာလ တုန်း က ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဂါးနက်စ် က သိပ်ကို နာမည် ကြီး ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၉ မှာ ထိုင်းအစိုးရ က ကျောင်းသားတွေ အများစု ကို မြန်မာ ပြည်ထဲ ပြန်ပို့ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး သစ်လုံးတွေ နဲ့ အလဲအထပ် လုပ်ဖို့ပါ။
ထိုင်းအစိုးရ ကလည်း ရန်ကုန် အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေ ကို နိုင်ငံခြား သတင်းထောက် တွေ ၀င်ခွင့် ပြု ဖို့ တိုက်တွန်း ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီက အစိုးရကလည်း သဘောတူ ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက် စာရင်းထဲမှာ ကျွန်တော့် နာမည်ကိုလည်း ထည့်ထား ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံး ကို ကျွန်တော့် စာရင်း ရောက်တဲ့ အခါ ကျွန်တော့် နာမည်ကို အမှန် ခြစ်ထည့် လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘာကြောင့် အဲဒီလို ခြစ်သလဲလို့ အရာရှိ ကို မေးတဲ့ အခါ ဒီလို ခြစ်ရ မှာ ငါ့တာဝန်ပဲ လို့ ဖြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခရီးစဉ် က အစောင့်အကြပ် တွေနဲ့ သိပ်ကို တင်းကြပ် ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် တို့ကို ရန်ကုန်ကို ၀င်ခွင့် မပြုပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ် ကို ဆိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကလော ကို ပို့ တယ်။ ပြီးတော့ ကယား ပြည်နယ် က လွိုင်ကော်မြို့ကို သွားရ ပါ တယ်။ ပြီးတော့ တောင်ကြီး ကို ရောက်တယ်။မိတ္ထီလာ ကနေ မန္တလေး ရောက်တယ်။ ပြီးတော့ ပုဂံ မှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ရက်လောက် လည်ခွင့် ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ကို တန်းသွား ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲ တက်ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် က ပြုလုပ် တာပါ။ ကျွန်တော် မေးခွန်း အချို့ မေးခဲ့ ပါတယ်။ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဦးနေမင်း ကို ဖမ်းဆီး တဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လေဆိပ်ကို သွားရ ပါတယ်။ လေဆိပ်ရောက်တော့ အရာရှိ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆီ ပြေးလာပါ
တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အုပ်စုနဲ့ ခွဲပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက် နဲ့ တွေ့ခွင့် ပေးပါတယ်။ သူက ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် ပါ။ သူက ကျွန်တော် တို့ကို မြန်မာပြည် ကို ပြန်လာ လည်ဖို့ ဖိတ် ခေါ်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါက စိတ်ဝင် စားစရာကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါ ပြန်လာရင် အုပ်စုလိုက် မလာချင် ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင် သီးခြား လာချင် ပါတယ်။ သူက ခင်ဗျား လာလည် နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း တစ်ပတ် လောက် လာလည် ခွင့် ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း မှာတော့ ကျွန်တော့် ကို ၀င်ခွင့် မပြုတော့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ အထိပေါ့။
ခင်ဗျား မြန်မာပြည် ကို မရောက်တာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့။ အခု ခင်ဗျား က ခရီးတိုလေး ပြန်လည် ပတ်ခွင့် ရပါပြီ။ ဒီလိုချိန်မှာ ခင်ဗျား ရဲ့ အတိတ်ကြောင်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးခွန်းတွေ ကြား ရတဲ့ အခါ ဘယ်လိုများ ခံစားရ ပါသလဲ။
ဒီကို ပြန်လာရတာ သိပ်ကို အံသြစရာ ကောင်းတဲ့ ခံစားချက် ပါဗျာ။ လူတွေကို ကျွန်တော့် ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ပြောရတာလည်း သိပ်ကို ပျော်ရွှင် ပါတယ်။ ဒီမှာ ရှိတဲ့ လူတွေ ကလည်း ကျွန်တော့် ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကြား သိနိုင်တာ ပျော်ရွှင် ပါတယ်။ ဒါက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ပါပဲ။ အခြား တစ်ဖက်က ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ် က ထိပ်ပိုင်း ကနေ အောက် ကို သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။ အခြေခံ ပါဝါ အဆောက်အအုံတွေ ကတော့ အခုချိန်ထိ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု မရှိသေး ပါဘူး။
ကျွန်တော် နောက်ထပ် မေးခွန်း တစ်ခု လောက် မေးချင် သေးတယ်ဗျ။ ခင်ဗျား က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တွေ ထိန်းချုပ် ထားတဲ့ တောတွေ၊ တောင်တွေကို လှည့်လည် သွားလာ ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ လည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အတွေ့အကြုံတွေ ကနေ ခင်ဗျားက တန်ဖိုး ရှိပြီး နာမည်ကျော် တဲ့ စာအုပ်တွေ ရေးသား နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ Burma in Revolt,The Land of Jade,Rise and Fall of Burmese Communism စတာတွေ ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ ခင်ဗျား အကြိုက်ဆုံး စာအုပ်က ဘာလဲ။
အဲဒီလို ပြောဖို့ ရာတော့ ခက်ပါ တယ်ဗျာ။ တစ်အုပ်နဲ့ တစ်အုပ် က မတူကွဲပြားမှု တွေ ရှိပါ တယ်။ The Land of Jade ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးရာ ဆန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့် မိသားစုနဲ့ ပတ်သက် ပါတယ်။ The Land of Jade ကို ဒိန်းမတ်လို ဘာသာပြန် ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ပိုင်း က မဏိပူရလို လည်း ဘာသာ ပြန်ပါတယ်။
ဘာတီရေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၆ မှာ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ တားဆီး နေတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေထဲ ကပုဒ်မက ၅၉(စ)ပါ။ အဲဒီပုဒ်မ ကို ပြင်ဆင်ပေး လိမ့်မယ်လို့ ခင်ဗျား ထင် ပါသလား။
အဲဒီ ပုဒ်မကို ပြင်ဖို့ရာ သိပ်ကို ခက်ခဲ ပါတယ်။ နည်းဥပဒေ တွေကြောင့်ပါ။ လွှတ် တော်ထဲမှာ ၇၅ ရာခိုင် နှုန်းကျော်နဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲလည်း လုပ်ရမှာမို့ပါ။လူတွေမေ့ နေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အချက် လည်းရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး ၇၄ အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ ပြောခဲ့တာက နိုင်ငံခြား တိုင်း ပြည်နဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့ သူတွေက သမ္မတ မဖြစ် နိုင်ဘူးလို့ပဲ ပြောခဲ့တာ။ လက်ထပ်တာတွေ၊ သားသမီး ကိစ္စတွေ မပါဘူး။ အဲဒီကာလက ရန်ကုန်ရဲ့ လူဦးရေ တစ်ဝက်က အိန်္ဒိယသား တွေပါ။ ပြီးတော့ အိန်္ဒိယ ကလည်း လွတ်လပ် ရေးရပြီး ခါစပါ။ ဒီတော့ မြန်မာ-အိန်္ဒိယ အနွယ်တွေ သမ္မတ မဖြစ်အောင် တားရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းကိုလည်း ကြည့်ပါ။ သူ ရတနာ နတ်မယ်ကို လက်ထပ် ခဲ့တယ်။ သူမ က ဗြိတိသျှ နိုင်ငံသူပါ။ သူက သြစတြေး လျ မှာတော့ နေတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေသာ အတည် ပြုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဦးနေ၀င်း တောင် သမ္မတ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူက နိုင်ငံခြားသူကို လက်ထပ် ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တား မြစ်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ကတော့ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး။ သူ့ကို သက်သက် ရည်ရွယ် တားမြစ်ထား တာဖြစ်တယ်။ တခြား ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်က ဒါကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ် မလား တော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ ကတော့ သိပ်ခက်ခဲ ပါတယ်။ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ဒီကိစ္စဖြစ် ဖို့ကတော့ အတော်လေး အလှမ်း ဝေးပါ တယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ရေးမှာ စစ်တပ် ပါဝင်ပတ် သက်မှုက အနှေးနဲ့ အမြန် လျော့ကျသွား မယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား။
ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တော့ ယူရမှာ ပါ။ မျိုးဆက် တစ်ဆက် လောက်လည်း ဖြစ် ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေက စစ်တပ် ကို နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်နိုင် အောင် သေချာ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီမိုက ရက်တစ်ဆန်ပြီး ဖယ်ဒရယ် အခြေခံဥပဒေ လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါမျိုးကို အသစ်ရေး ဆွဲတာတို့၊ ပြင်ဆင် တာတို့ မလုပ်မချင်းတော့ ဒီကိစ်္စက အမြန်အကောင် အထည်ပေါ်မယ့်ပုံ မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေး မှာ ပါဝင်ပတ်သက်တာ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး လို့ထင်တယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက စစ်တပ်က ဗြူရို ကရေစီ ယ်္တရားမှာ ပါဝင်ပတ်သက် နေခြင်းပါ။ အစိုးရ ဘယ်သူပဲ တက်တက်၊ အစိုးရအတွက် အလုပ် လုပ်ပေးနေတဲ့ ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းတွေကို စစ်တပ်က လွှမ်းမိုးထား ပါတယ်။ အစိုးရ ဌာနတွေ၊ အင်စတီကျုးရှင်း တွေကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာအုပ်ချုပ်နေသူ အများစုက စစ်သား အဟောင်းတွေပါ။ ခင်ဗျား က လုံလောက်တဲ့ အရပ်သား ၀န်ကြီးတွေပါ တဲ့ အစိုးရရှိရင်တောင်မှ ဗြူရိုကရေစီ ယန္တရား ကို စစ်တပ်က ကာလရှည်လွှမ်းမိုးထား တာပါ။ နောက်မျိုးဆက်သစ်၊ ခင်ဗျားမျိုး ဆက်က ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ Challenge ၊ ကျွန်တော်တော့ မသိဘူး၊ (ရယ်လျက်)။ အဲဒါ မပြောင်းဘဲနဲ့တော့ အခြား အခြေခံ အင်စတီ ကျုးရှင်းတွေ ပြောင်း မယ်လို့ ကျွန်တော် မမြင်ဘူး။ ဒါကြောင့် လည်း ဗြူရိုကရေစီ ယန္တရားမှာ စစ်တပ် ပါဝင် ပတ်သက် နေခြင်းက နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင် ပတ် သက်နေ တာထက် ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုချင်တာ။
စစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တွေ အကြားက အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် နောက်ကွယ်က အခြေ အနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျား အမြင်ကို ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတဲ့ စပ်ကူး မက်ကူးကာလမှာ ပဋိပက်္ခ ဇုန်အတွင်းက သယံဇာတ တွေကလျှင် မြန်စွာ ပျောက်ကွယ် ကုန်တယ်လို့ ခင်ဗျား ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု ဘယ် ဟာက ပိုပြီးအရေးပါ ပါသလဲ။
တကယ်တော့ ဒီကိစ္စ နှစ်ရပ်လုံးက ခွဲ ခြား လို့မရပါဘူး။ ဒါက နှစ်ဘက်လုံးရဲ့ လို အပ်ချက်တွေကို ညှိနှိုင်းရမယ့် ကိစ်္စပါ။ ဗမာ ရယ်၊ ဗမာမဟုတ်တဲ့ အခြားတိုင်းရင်း သား အဖွဲ့တွေမှာ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ် ချင် ဖြစ်မယ်၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ် ချင်ဖြစ်မယ်။ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ဘုံသဘော တူညီချက် ကတော့ ပင်လုံစာချုပ်ကို အသိအမှတ် ပြုရေး ပါ။ ပြောရရင် ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု၊ ဖယ် ဒရယ်စစ်တပ် တည်ဆောက်ရေးပါ၊ ဘယ်လို လဲတော့ မသိဘူး။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကတော့ သေချာတယ်။ အစိုးရဘက်ကိုကြည့် မယ် ဆိုရင်လည်း သူတို့က ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာရမယ်၊ တည်ဆဲ ဥပဒေတွေကို လေးစားရမယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးက ဒုတိယအရေး ပါတဲ့ကိစ္စပါ။ ပိုင်း ခြားပေမယ့် လိုင်းက ဒီမှာပါ။ နိုင်ငံရေးကိစ္စ ပါ။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စက ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်း ရင်းသားတွေက ဗမာတွေကိုပဲ ဆန့်ကျင်နေ တာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ ကချင်ပြည်နယ်မှာဆို ရှမ်းနီအုပ်စုတွေ ရှိတယ်။ ပအို့ဝ်တောင်ကြား က ပအို့ဝ်တွေက ရှမ်းစော်ဘွားတွေကို ယခင် ကတည်းက တော်လှန်ခဲ့တာပါ။ ပြည်မကို မ ဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စက သိပ်ကို ရှုပ်ထွေးပါ တယ်။ ဗမာ သို့မဟုတ် မြန်မာဆိုတဲ့ ကိစ္စက သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန် တဲ့ အပစ် အခတ်ရပ်စဲ ရေး ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ စစ်တပ်က အလေး မထားတဲ့ စက္ကူ တစ်ရွက်ပဲ ဖြစ်နေလို့ မရပါဘူး။ ကချင် လွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော်က ၁၇ နှစ်တာ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူခဲ့တယ်။ ၁၉၉၄ ကနေ ၂၀၁၁ ထိပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်တော့ သူတို့တွေ တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရတယ်။ ကေအိုင် အေက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ချိုးဖောက် ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တပ်မတော်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာ တိုက် ခိုက်ခံနေရတယ်။ ကရင်ပြည်နယ် မှာတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ တိုက် ပွဲတွေ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီမှာ မကြုံဖူးတဲ့ ပမာဏနဲ့ အစိုးရတပ်တွေ အခြေစိုက်မှုက များပြား နေတယ်။ ရဟတ် ယာဉ်ကွင်းတွေ တည်ဆောက် တာမျိုး တွေ ပေါ့။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက်ပဲ တိုင်း ရင်းသား အဖွဲ့တွေကို လက်မှတ်ရေး ထိုင်းခိုင်း နေခြင်းက မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာရဲ့ အကြီးအကျယ် လွှဲမှားတဲ့ အချက်လို့ပဲ ထင် ရတယ်။ ဒါဟာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနိဂုံး ချုပ်ဖို့ရဲ့ အစလို့တောင် ပြောလို့ မရဘူး။ ဗမာ မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေနေတဲ့ နေရာ တွေမှာ စစ်ရေးချဲ့ထွင်တာတို့၊ တိုက်ပွဲဖြစ် တာတွေကို ရပ်တန့် ပစ်ရမယ်။ ရေးထိုးထား တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို နှစ်ဖက် လုံးက လိုက်နာရမယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု မပါတဲ့ ကနဦး ဆွေးနွေးမှုကို လုပ်ဆောင်ရင် ဘာတိုးတက်မှုမှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာ က MPC ကလည်း ဒါကို မလုပ်နိုင် ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီကိစ်္စက အနှစ် သာရ မရှိဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အခြားခိုင်မာတဲ့ သဘောတူညီ ချက် မရှိဘဲနဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဲ့တဲ့ စာရွက်တစ် ရွက်ပေါ်မှာပဲ လူတိုင်းကို လက်မှတ် ရေးထိုး ခိုင်းနေလို့ပါ။ ပြီးတော့ လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တွေကို ကားတွေ တင်သွင်းဖို့ လိုင်စင်တွေ ထုတ်ပေးတယ်။ အခြားစီးပွားရေး အကျိုး အမြတ် တွေ ရအောင် ဖန်တီးပေး နေတယ်။ ဒါက အလုပ် မဖြစ်ပါဘူး။ အကယ်၍ တိုင်း ရင်းသား ခေါင်းဆောင် အချို့က MPC ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံရင်တောင်မှ သူတို့ရဲ့ ဒေသ အသီးသီးမှာရှိတဲ့ သာမန်ပြည်သူ တွေ အကြားမှာ မကျေနပ်မှုတွေ၊ ကန့် ကွက်မှုတွေ ရှိလာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးက ကချင်ပြည် နယ်မှာ လည်း ဖြစ်ဖူး တယ်လေ။ နာမည်ကြီး တဲ့ အချက်က စစ်တပ်ထဲက လူအချို့က ဖယ် ဒရယ်ကို သဘောပေါက်တယ်။ ဖယ်ဒရယ် စနစ်ကို သွားမယ် ဆိုရင်လည်း မလွယ်ကူပါ ဘူး။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခတွေကို ကြည့်ပါ။ ဗမာနဲ့ ဗမာမဟုတ်တဲ့ ကြားမှာဖြစ် နေတဲ့ ပဋိပက္ခ မဟုတ်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ် မှာ ကြည့်ရင်လည်း ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသား တွေလည်းရှိတယ်၊ ပအို့ဝ် တောင်ကြားမှာ လည်း ရှမ်းစော်ဘွား တွေကို တွန်းလှန် ခဲ့တာပဲ။ ဗမာကို ပုန်ကုန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာ တွေက သိပ်ကို ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
ဆီးဂိမ်း ပိတ်ပွဲလက်မှတ် ရောင်းကုန်ပြီ
အများပြည်သူကို ဆီးဂိမ်း ပိတ်ပွဲလက်မှတ် ၈၀၀၀ လောက် ရောင်းချပေးမယ်လို့ ကြေငြာ ထားခဲ့ရာမှာ ခုအခါ အားလုံးနီးပါး ရောင်းကုန်သွားပြီလို့ နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်း သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးက အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
ပိတ်ပွဲ ကျင်းပမယ့် ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားကွင်းဟာ ပရိတ်သတ် ၃ သောင်းဆန့်ပေမယ့် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်မယ့် စင်ဘက်အခြမ်းကိုတော့ လက်မှတ်ရောင်းချခြင်း မရှိပါဘူး။
ကျန်တဲ့ လက်မှတ် ၂ သောင်းလောက်မှာ ၁၂၀၀၀ လောက်ကို သီးသန့်ဖိတ်စာတွေနဲ့ တက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပြီး လက်မှတ် ၈၀၀၀ လောက်ကိုတော့ ပြည်သူတွေကို ရောင်းပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေကို ရောင်းပေးတဲ့ လက်မှတ်တွေမှာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေ ဖြည့်သွင်းရတာမို့ မှောင်ခို ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ မရှိဘူးလို့ ဆီးဂိမ်း သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောပါတယ်။
တရုတ်သို့ ရာသီချိန် သွားရောက်သော လုပ်သားများ လူကုန်ကူးခံရဟုဆို
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ။ ။ တရုတ် နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သော ရာသီချိန်လုပ်သား များမှာ လူကုန်ကူးခံရခြင်း၊ လူ မှောင်ခိုလုပ်ခြင်းများခံကြရကြောင်း ရတနာမြေဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှ ဦးဇော်မြင့်ထွန်းက ပြောသည်။
နှစ်စဉ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရာ သီချိန်လုပ်သားများအဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံမှ လုပ်သား ၂၀၀၀ဝခန့်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၊ ကုန် တင်ကုန်ချ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စား သောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် သကြားစက်ရုံ၊ ကာရာအိုကေ ခန်းမနှင့် ကလပ်များတွင်လုပ် ကိုင်လေ့ရှိကြပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် လူကုန်ကူးခံရခြင်းများကြုံတွေ့ ရကြောင်း ပြောသည်။
ဦးဇော်မြင့်ထွန်းက ''စပါး စိုက်တဲ့ ရာသီကုန်ပြီဆိုရင် အပူ ပိုင်းဒေသဖြစ် တဲ့ မြင်းခြံ၊ နွားထိုး ကြီး၊ တောင်သာ၊ ကျောက်ဆည်၊ စစ်ကိုင်းနဲ့မုံရွာေ တွက ဖေဖော်ဝါရီ မှ ဇွန်လအတွင်း သွားရောက်ကြ တယ်။
ရာသီကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ပြန် လာကြတယ်။ အဲဒီမှာအမျိုးသ မီးတွေကတော့ တရုတ်အမျိုးသား တွေအတွက် မိန်းမအဖြစ်ရောင်း စားခံရတာများတယ်''ဟုပြောသည်။
ယင်းကဆက်လက်ပြီး အ ဆိုပါလုပ်ကိုင်ကြသော လုပ်သား များမှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု ကြောင့် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
''သူတို့တွေက နယ်စပ်မြို့ တွေဖြစ်တဲ့ ကြယ်ဂေါင်နဲ့ ရွှေလီ မြို့တွေကို သွားကြတာဖြစ်ပြီး ပြည်မကြီးကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် တရုတ် အစိုးရဘက်က အကူအညီပေး တာမျိုးမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ လုပ်သားက ရဲနဲ့တွေ့တော့မှ ဒီ ဘက်ကိုပြန်ပို့တော့မှ သိရတာတွေ ဖြစ် တယ်။ ဟိုဘက်မှာမြန်မာလူမျိုး ဘယ်လောက် များများ ရောက် ပြီး ဘယ်လောက်အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာလဲ မသိနိုင်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ သုတေသန လုပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေမရှိသေးလို့ဖြစ် တယ်''ဟု ထပ်မံပြောသည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အ ဓိက ကုန်ကူးခံရခြင်းမှာ တရုတ် နိုင်ငံဥပဒေအရ ကလေးမွေးပေး ရန်အတွက် ဝယ်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၅ဝကျော် နီးပါးခန့်အထိ လူကုန်ကူးခံရ ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုင်ဖွန်မှန်တိုင်းဒဏ် ခံရတဲ့ ဒေသကို သွားရောက်
နိုဝင်ဘာလက တက္ကလိုဘန်းမြို့ကမ်းခြေကို စူပါတိုင်ဖွန်မုန်တိုင်း အပြီး တွေ့မြင့်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီဟာ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးရွားဆုံး ခံခဲ့ရတဲ့ တက္ကလိုဘန်းမြို့ကို သွားရောက်နေပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ဟိုင်ယန် စူပါတိုက်ဖွန် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူပေါင်း ၆ ထောင်ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၄ သန်းလောက် နေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ ရပါတယ်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် အမေရိကန်အစိုးရက ဒေါ်လာ ၆၂ သန်း အကူအညီ ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာ နောက်ထပ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၄ ဒဿမ ၆ သန်းကို အကူအညီ ပေးဖို့လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကြေညာပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဘန်းနစ်နို အကွီနိုက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီကို မြို့တော် မနီလာက သမ္မတနန်းတော်မှာ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ရင်း ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက် အမေရိကန်ရဲ့ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ချီးကျူး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကြား စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးတွေ ပိုတိုးလုပ်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဖိလစ်ပိုင်ကို ၂ ရက်ကြာ အလည်အပတ် ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ အစောပိုင်းကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဲဘတ်ဒယ်လ် ရိုစာရီယိုနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကုန်သွယ်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနဲ့ လုံခြုံရေးတွေကို ဦးတည်ထားတဲ့ကိစ္စ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း အမေရိကန်ရဲ့ အကြာရှည်ဆုံး မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေထဲက တနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ အခု ခရီးစဉ်ဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ နယ်မြေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တင်းမာမှုတွေ မြင့်တက်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာ အငြင်းပွားမှုတွေမှာ ဘယ်ဘက်ကမှ ရပ်တည်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန် ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံး တရုတ်က ဒေသတွင်းရေပြင်ကို လွှမ်းခြုံပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာတော့ အမေရိကန်ဟာ သူ့မဟာမိတ်တွေဘက်က ရပ်တည် ကာကွယ်နေပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်ကို ရောက်နေစဉ် ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အမေရိကန်တပ်တွေ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံထဲမှာ တိုးချဲ့ချထားရေးကိစ္စကလည်း တစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။
မင်းဘယ်လောက်ပညာတတ်လဲ၊ ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ ထောင်ဘူးဝမှာထားခဲ့
အာဏာပိုင်နှင့်နီးစပ်သူများ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများအတွက်မူ ထောင်သည် အပြင်လောကနှင့် ၀င်းထရံတစ်ခုသာခြားသည့် သဘောဆောင်ပြီး ကြောက်စရာလောကငရဲမဟုတ်ပါ။
ထောင်ကျတစ်ဦး ဘုရားခန်းမှာအိပ်မလား။ ထမင်း၊ ဟင်း ပူပူနွေးနွေးချက်စားချင်လား။ အဆင်သင့်ပင်။ မိလ္လာသွားချင်လား။ ခွက်လေးထိုးပေး။ ဆေးတဲ့သူကသွားဆေး။ သူ့ဈေးနှင့်သူရှိကြသည်။ နှစ်ထောင်ကျော်ပေးရမည့် ဂရန်းရွိုင်ရယ်အရက်ပုလင်းတစ်ပြားကို တစ်သောင်းခွဲပေးလျှင်ရနိုင်သည်။ ငွေခုနစ်သိန်းပေးနိုင်လျှင် တစ်သောင်းတန်ငွေဖြည့်ကတ်ထည့်ထားသည့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတစ်လုံးရနိုင်သည်။ အကပ်ကောင်းဖို့နှင့် ငွေရှိဖို့သာလိုပါသည်။
ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သော်လည်း ယင်းအခွင့်အရေးများကို လွယ်လွယ်နှင့်မရသည့်အကျဉ်းသား နောက်တစ်မျိုးရှိသေးသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဟု စစ်အစိုးရလက်ထက်က ကြွေးကြော်ခဲ့သည့် နိုင်ကျဉ်းများပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပိုက်ဆံရှိသူတစ်ဦး ထောင်ကျလာပါက ထောင်ထဲတွင် ၎င်းကိုဘောက်ချာဟုခေါ်သည်။ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ပြန်ခန့်ထားသည့် ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသား တန်းစီးများက ပိုက်ဆံပေးလျှင်ရသည့် အခွင့်အရေးများပေးလျက် ထောင်မှူးအတွက် ၎င်းထံမှဖန်တီးပေးသည်။ ထောင်မှူးက ထောင်ပိုင်အတွက် ပြန်ခွဲပေးသည်။
ယခင် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွန့် ကိုးကွယ်သည့် တိံကြားမင်းခေါင်ဆိုလျှင် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အကျဉ်းကျနေစဉ် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ဒိုးနတ်မုန့်ကို နေ့ချင်းပြီးမှာစားခဲ့ပြီး သူ့ကိုပင် မျှဝေကျွေးခဲ့ကြောင်း စစ်အစိုးရလက်ထက်က နိုင်ငံရေးပုဒ်မဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့် ဇာဂနာကပြောသည်။
“မနက်လေယာဉ်နဲ့ပါလာတဲ့ ဒိုးနတ်မုန့် ချက်ချင်း သူစားရတယ်။ ကျွန်တော့်တောင် ကျွေးလိုက်သေးတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခင် န၀တအစိုးရလက်ထက်တွင် ထောင်တွင်းလူမဆန်စွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်း၊ ထောင်ဝင်စာတွေ့လျှင်ပင် အကျဉ်းသားထံမှ ဖြတ်တောက်သိမ်းဆည်းပစ်ခြင်း၊ နေမကောင်းလျှင် ထိရောက်သည့်ကုသစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိခြင်းတို့ ရှိခဲ့သော်လည်း ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတုိ့ကတော့ ထောင်ဆေးရုံ၌ ခုတင်အပိုင်စားဝယ်နိုင်ပါသည်။
အချို့အကျဉ်းသားများဆိုလျှင် အလုပ်ကြမ်းစခန်းမလိုက်လို၍ ထောင်ဆရာဝန်ထံလာဘ်ပေးကာ HIV ပိုးရှိကြောင်း ထောက်ခံစာကို တောင်းယူတတ်ကြသည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ၀င်းနိုင်ဦးရေးသားသည့် “ရာဇ၀င်ရှင်းတမ်း”ကိုယ်တွေ့စာအုပ်တွင် မှတ်သားရသည်။ HIV ပိုးရှိလျှင် အလုပ်ကြမ်းစခန်းမလိုက်ရပေ။
“ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေ၊ အာဏာပိုင်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တာကတော့ အသေအချာပါ။ အဲဒီအနေအထားတွေကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အကျဉ်းထောင်ဥပဒေ၊ အဲဒီဥပဒေနဲ့အညီ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အဲဒါတွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းကပြောသည်။
ထောင်ဝန်ထမ်းများ၏လစာ၊ ခံစားခွင့်များကို လိုအပ်သလိုပြုပြင်ပေးပြီး အကျဉ်းထောင်များကို သီးခြားလွတ်လပ်သည့် စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ပေးလိုက်ပါက အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားပြဿနာ ပြေလည်သွားမည်ဟု ၎င်းကအကြံပြုသည်။
ပြစ်မှုကြွေးကို ချွေးဖြင့်မဆပ်ရသူတို့အတွက် ထောင်သည်ကြောက်စရာမကောင်းသည့်အပြင် နောက်ထပ်ပြစ်မှုများကို အလွယ်တကူကျူးလွန်ရန် အားပေးရာရောက်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးကပြောသည်။
“အခုက ထောင်ကထွက်လာရင် ကောင်းဖို့ကိုထားလိုက်၊ ထောင်ကိုမကြောက်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားတာ။ ထောင်ကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာက ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့ကို မကြောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဆင့် ဖြစ်သွားတာပါ။ အမှန်က ထောင်ထဲတစ်ခါရောက်သွားဖူးလို့ရှိရင် နောက်တစ်ခါ ထောင်ထဲပြန်မလာနိုင်အောင် ဒီလူရဲ့ စိတ်ဓာတ်စာရိတ္တအားလုံးကို ပြုပြင်ပေးတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က ရေးသားခဲ့သော အကျဉ်းထောင်လက်စွဲဥပဒေသည် ယနေ့အထိ ခေတ်မီနေဆဲဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေအတိုင်း အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးကို ထောင်အာဏာပိုင်တို့က အပြည့်အ၀ပေးသင့်ကြောင်း၊ ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြု၍ ဥပဒေကပေးထားသည့် အခွင့်အာဏာကို လက်တစ်လုံးခြား လိုရာယူသုံးစွဲနေကြသည့်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စိန်ခေါ်ရာရောက်ကြောင်း အဆိုပါတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
လူကုန်ကူးမှုဖြင့် ၄၄ နှစ် ကျခံနေရသော နိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသားတစ်ဦးဆိုလျှင် အင်းစိန်ထောင်တွင်း မနက်စာကို သူ့စိတ်ကြိုက် အပြင်ကတပည့်တပန်းများက ပြင်ဆင်ဝယ်ကျွေးရကြောင်း ယင်းအမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးအတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်များက အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် ယနေ့ကာလတွင်ပင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကော့သောင်းထောင်ပြဿနာက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကော့သောင်းထောင်ဆူပူမှုဟု အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တွင် ထောင်ပိုင်က အကျဉ်းသားအချင်းချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ကို မကျေနပ်၍ အကျဉ်းသားရာချီဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ထောင်အာဏာပိုင်တို့က သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။ ထောင်ဆူပူမှု၏ အဓိကပြဿနာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနှင့် ထောင်ကျနေသော အကျဉ်းသားအချို့ ဟန်းဖုန်းကိုင်ဆောင်ခွင့်ရသည့်အပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေသည်ကိုပါ မြင်တွေ့ရခြင်းကြောင်း အကျဉ်းသားများ ဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။
“ဟိုတုန်းက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာ အပေါ်ကညွှန်ကြားတာတစ်မျိုး။ အောက်ခြေကလုပ်တာတစ်မျိုး ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ လူကြီးတွေကြည့်ကောင်းသလောက်လုပ်ပြီး ထောင်ပိုင်အချို့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှ အမှားခံကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကော့သောင်းဖြစ်စဉ်မှာလည်း လိုအပ်တဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးမှု အမြန်ဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်”ဟု နေပြည်တော်အကျဉ်းဦးစီးရုံးချုပ်မှ အရာရှိတစ်ဦးက ထောင်တွင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ပြောကြားသည်။
သို့သော် ယနေ့အထိ သက်သာချောင်ချိရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖွင့်ထားသော အကျဉ်းထောင်ဝင်းပြင်ပသက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်များသည် ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတို့ မိသားစုဖြင့် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံရာ၊ ထောင်တွင်း၊ ထောင်ပြင် အပေးအယူလုပ်ရာနေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်ရှိနေဆဲပင်။
နိုင်ငံတကာအကျဉ်းထောင်များတွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပါက အိမ်ကမိန်းမနှင့် ထောင်တွင်းသုံးလတစ်ကြိမ် ပေးနေသည့်စနစ်ရှိသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံက အချို့ရဲဘက်စခန်းများတွင်မူ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပေါင်း၍ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရထားခြင်းကြောင့် မည်သည့်အရံအတားအဆီးများကိုမှ ခက်ခဲစွာမဖြတ်သန်းရဘဲ စက်ဘီးတစ်စီးနောက်တွင် လမ်းကြုံစီး၍ ရဲဘက်စခန်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း စာရေးဆရာမင်းဒင်က သက်ခိုင်ဝတ္တုတွင် ရေးသားထားသည်။
နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)ကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းများ ထောင်တွင်းဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဝန်ထမ်းအာဏာပိုင်တို့ဘက်ကလည်း အကျဉ်းသားများကို အရင်လို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုး၊ မ၀ရေစာကျွေးမှုမျိုး၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးတို့ကို အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် သိသာစွာလျှော့ပေါ့လိုက်သည်။
သို့သော် သူ့ဈေးနှင့်သူ ထောင်တွင်းဘောက်ချာဖြတ်သည့်စနစ်ကတော့ သက်ဆိုးရှည်နေပါသေးသည်။
ရေးသားသူ- အေးသူစံ၊ အောင်သစ်လွင်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုများကြောင့် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာသည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုမှုများ၊ သပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုမှုများအကြား ဒေသခံအာဏာပိုင်၊ မူလနေထိုင်သူနှင့် ကျူးကျော်သူတို့အကြား ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်သည့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများ၌ မြေလွတ်၊ မြေလပ် စီမံကိန်းမြေနေရာများတွင် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် လာရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်သူများနှင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်များအကြား ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တွင် ကျူးကျော်ပြဿနာများကြောင့် အာဏာပိုင်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု သုံးကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့စွန်နေရာအချို့တွင် ဓနိမိုးသက်ငယ်ချပ်များ၊ ၀ါးလုံးများတင်ဆောင်လာသည့် အမည်မသိဒိုင်နာယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်များ ညအချိန်၌ လာရောက်ပြီး မြေလွတ်၊ မြေလပ်များပေါ်တွင် နေရာချထားရာမှ ကျူးကျော်ပြဿနာများ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဒေသခံတစ်ဦးကဆိုသည်။
“လွတ်နေတဲ့မြေတွေပေါ်မှာ ၀ါးလုံးတွေ၊ ဓနိတွေကို ကားပေါ်ကနေ လာပစ်ချသွားတယ်။ ဘယ်ကမှန်းလဲမသိဘူး”ဟု ယင်းဒေသခံကဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကျူးကျော်တဲများ စတင်တဲထိုးပြီးနေကြသည့်ပြဿနာမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အစိုးရက သရ၀ဏ်နှင့် ရတနာအိမ်ရာစီမံကိန်း ဆောက်လုပ်မည်ဆိုခြင်းကြောင့် ယင်းနေရာတွင် နေ့ချင်းညချင်း ကျူးကျော်တဲများ ရာနှင့်ချီရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
“အဲဒီတုန်းက မြေနေရာဦးပြီး တဲထိုးထားရင် အနည်းဆုံးတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရမယ်ဆိုလို့ လာနေကြတာ”ဟု ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆိုသည်။
ယင်းပြဿနာကို မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနက ခေါင်းနားပန်းကြီးစွာ ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။ ခါတော်မီကျူးကျော်တဲများတွင် နေထိုင်သူများ၊ မူလနေထိုင်သူများအကြား တရားမျှတမှုရှိစေရန် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင် နေရာများပြန်လည်ချထားပေးခဲ့ရကြောင်း မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မီမီဝင်းကပြောသည်။
ယင်းခါတော်မီကျူးကျော်တဲများတွင် နေထိုင်သူများမှာ အနည်းဆုံးရာကျော်ရှိပြီး မူလအမှန်တကယ်နေထိုင်သူများကို ပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်း အထက်ပါညွှန်ကြားရေးမှူးကဆိုသည်။ ယင်းနယ်မြေတွင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ဆိုးဆိုးရွားရွား ပဋိပက္ခတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ပေ။
ကျူးကျော်တဲများဖြင့် လာရောက်နေထိုင်သူများနှင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်တို့ အဓိကထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နယ်မြေမှာ ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီပထမပတ်က လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် ပီမိုးနင်းလမ်းရှိ စီမံကိန်းမြေနေရာတွင် စတင်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းနေရာကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုတွင် လုံခြုံရေးရယူထားသော ရဲများနှင့် စည်ပင်ဝန်ထမ်းများကို ကျူးကျော်နေထိုင်သူများက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများဖြင့် နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အခြေအနေထိ ရောက်ခဲ့ရသည်။
ကျူးကျော်နေထိုင်သူအများစုမှာ နောက်ကွယ်က အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်သူများရှိနေသဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ အတင့်ရဲစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလက လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်ကို ရည်ရွယ်၍ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူ အသက်(၄၀)အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးကသုံးသပ်သည်။
“အဲဒီတုန်းက ဥပေဒအရလုပ်မယ်ဆိုရင် တော်တော်အထိနာမယ်”ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရအနေဖြင့် ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်စရိတ်ကြီးမြင့်လာမှုများကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအပေါ် ယနေ့အထိ နေထိုင်စရာမပေးနိုင်သေးသည်မှာ ပေါ်လွင်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်စိုးကသုံးသပ်သည်။
“သူတို့ကိုနေဖို့ အစိုးရကပေးရမှာ ဒါဆိုရင် ဒီပြဿနာ ဖြစ်လာစရာမရှိဘူး”ဟု အထက်ပါညွှန်ကြားရေးမှူးက ဝေဖန်ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ များပြားလာခြင်းကြောင့် နေထိုင်မှုစရိတ်ကြီးမြင့်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်း၏အကျိုးဆက်မှာ အိုးမဲ့၊ အိမ်မဲ့ ကိန်းဂဏန်းများပြားလာကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း၏ စစ်တမ်းများမှသိရသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့စာရင်းကို တိတိကျကျ ကောက်ခံနိုင်ခြင်းလည်း မရှိသေးပေ။
“တဲဝင်ဆောက်ဖို့ ငွေတောင်မရှိလို့ တိုင်လေးတိုင်စိုက်ပြီး စောင်တွေကာနေရတဲ့ အိမ်တွေတောင်ရှိတယ်”ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကျူးကျော်နေထိုင်သူ မိသားစုတစ်စုမှ လက်သမားအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အမျိုးသားတစ်ဦးက ၎င်းတို့၏အခက်အခဲကိုပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ကျူးကျော်နေထိုင်သူအများစုမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် နေထိုင်သူအများစုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တွင် နေ့စဉ်ကြုံရာကျပန်းအလုပ်များဖြင့် ရုန်းကန်နေထိုင်ကြရသည်။
မိသားစုတစ်စုလျှင် နေ့စဉ် ၀င်ငွေနှစ်ထောင်မှ ငါးထောင်ကြားရရှိသူများအတွက် အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ရန်မှာ အိပ်မက်မျှသာဖြစ်ကြောင်း ကျူုးကျော်တဲများတွင်နေထိုင်သူများကပြောသည်။
“တချို့က အစ်မတို့ကျုးကျော်သမားတွေ အတင့်ရဲတယ်လို့ပြောကြတယ်။ အမှန်တော့ ကျူးကျော်တယ်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်လာပြီး မြေနေရာလာဦးကြတဲ့သူတွေကြောင့် တကယ်ကျူးသမားတွေအတွက် ပိုခက်ခဲလာပြီ”ဟု လှိုင်သာယာအတွင်းပဒံအနီးမှ ကျူးကျော်တဲတွင်နေထိုင်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဆိုသည်။
လက်ရှိအစိုးရဆောင်ရွက်နေသော အိမ်ရာစီမံကိန်းသစ်များတွင် ၀င်ငွေနည်းပြည်သူများကို အဓိကဦးစားပေးရောင်းချခြင်းများအပြင် လက်ရှိကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို စာရင်းကောက်ယူပြီး ၎င်းတို့ခေတ္တနေထိုင်ရန် နေရာထိုင်ခင်းများကို မြို့ပြင်ရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်းများတွင် အလွန်နှုန်းထားချိုသာသည့် တန်ဖိုးနည်းအငှားအိမ်ရာငယ်များကို တည်ဆောက်ပေးသင့်ကြောင်း၊ အလွန်သက်သာသည့်နှုန်းထားဖြင့် အစိုးရက တိုက်ရိုက်ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ကြောင်း အထက်ပါညွှန်ကြားရေးမှူးကဆိုသည်။
“အဲဒီအိမ်တွေကို စာရင်းပြုစုထားတဲ့ ကျူးကျော်တွေကိုပဲ ငှားရမ်းရောင်းချသင့်တယ်။ ဒါက လောလောဆယ်တော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ နိုင်ငံမှာက ၀င်ငွေအလယ်တန်းစားလူတွေတောင် မြို့စွန်တစ်နေရာမှာ အိမ်မ၀ယ်နိုင်သေးဘူး။ အဓိကတော့ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေ ကြီးနေတဲ့ပြဿနာကြောင့်ပေါ့”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျူးကျော်ပြဿနာမှာ ယခုလတတိယပတ်က တွံတေးမြို့နယ်မှ ကျေးရွာသုံးရွာအနီးတွင်ရှိသော စီမံကိန်းမြေနေရာကျယ်တွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များက လာရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်ရာမှ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအ၀င် ဒေသခံများနှင့် ကျူးကျော်တဲထိုးနေထိုင်သူများ နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခအသွင်အထိပင် ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာလည်း မြေနေရာဦးရန် အဓိကအကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျူးကျော်တဲထိုးနေထိုင်သူများနှင့် မူလမြေနေရာပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ပွားသည့်ပဋိပက္ခတိုင်း အစိုးရက အချိန်မီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း စက်မှုဇုန်မြေနေရာအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ကျူးကျော်ခံခဲ့ရသူ စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဝေဖန်သည်။
အများစုမှာ ဒေသခံအာဏာပိုင်၊ ဒေသခံစည်ပင်များဖြင့်သာ အကြိမ်ကြိမ်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြဿနာကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းနေရကြောင်း အထက်ပါလုပ်ငန်းရှင်ကဆိုသည်။
“စက်မှုဇုန်တွေရဲ့ခြံစည်းရိုးဘေးမှာ နေကြတာအများကြီးပဲ။ စည်ပင်က စာကပ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး”ဟု အထက်ပါလုပ်ငန်းရှင်ကဆိုသည်။
ကျူးကျော်များကလည်း မြေနေရာတစ်ခုဝင်ယူပြီး လူအစုအဖွဲ့များလျှင်များသလို နေရာတစ်ခု သေချာသွားနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း သုံးလာသည်။
ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်တွင် နေ့စဉ်တစ်စထက်တစ်စ တိုးပွားလာသည့် ကျူးကျော်ဦးရေကို အစိုးရက စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းမရှိပါက နောက်ပိုင်းတွင် မလိုလားအပ်သော အကြမ်းဖက်လာနိုင်သည့် ပဋိပက္ခများမှာ အာဏာပိုင်များနှင့် ကျူးကျော်များအကြား ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သေးကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများကသုံးသပ်သည်။
ထို့အပြင် ကျူးကျော်များ၏ မြေနေရာဦးမှုများတွင် တစ်စထက်တစ်စ ပြဿနာကြီးထွားလာအောင် လုပ်သည်ဆိုသော လှုံ့ဆော်သူများကိုလည်း အစိုးရက အချိန်မီဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေနေရာကျူးကျော်ခံရသူများကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ အမိန့်တစ်ခုလိုတယ်။ အဲဒီအမိန့်မကျသေးသရွေ့ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ကုန်တယ်”ဟု တွံတေးမြို့နယ်မှ ကျူးကျော်ပဋိပက္ခတွင် ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ရသူ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ၎င်း၏အမြင်ကိုပြောသည်။
ဗီဇာ ၄ နှစ်ပြည့် အလုပ်သမားများ ကြိုလုပ်ရန် မြန်မာသံရုံး တိုက်တွန်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ၄ နှစ် ဗီဇာသက်တမ်းပြည့် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေအတွက် သက်တမ်းတိုးတဲ့ ကိစ္စကို တနေရာတည်းအပြီး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် (OneStopService) ရုံးတွေ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မြန်မာသံရုံးကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းအလုပ်သမားရုံးတွေဆီ အလုပ်ရှင်နဲ့ အတူ သွားရောက်ပြီး သက်တမ်းတိုးတဲ့ကိစ္စကို ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားကြဖို့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ သံတမန်အရာရှိ ဦးကျော်ကျော်လွင်ကို ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အပါအ၀င် အခြားထင်ရှားသောမြို့ကြီးများရှိ အရက်၊ ဘီယာ ရောင်းချသောဆိုင်များ၌ နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ တည်ခင်းရောင်းချသည်ကို မတွေ့ရတော့ပေ။
သို့သော် ၀ယ်ယူလို့တော့ ရရှိနေသေးသည်။ ဆိုင်ရှင်များက လူစိမ်းများကို မရောင်းချရဲသော်လည်း ရင်းနှီးသူများကိုမူ အလွယ်တကူ ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ပြီး တခြားသောအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် လိုက်လံစစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေသဖြင့် စတိုးဆိုင်များ ပေါ်တင်မရောင်းချတော့ခြင်းဖြစ်သည်။
တည်ဆဲဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ တရားဝင်ကုန်သွယ်လိုင်စင်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုမထားသဖြင့် ရောင်းချခြင်းတွေ့ရှိပါက တရားဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူခြင်းခံရတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ပေါ်တင်မရောင်းချရဲဖြစ်လာကြသည်။
“ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ပေါ်တင်မရောင်းရဲဘူး။ ပစ္စည်းကတော့ရှိတယ်။ ဈေးက အရင်ကထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် တက်သွားတယ်”ဟု မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ယမကာရောင်းချသော စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးကပြောသည်။
တရားမ၀င်မှောင်ခိုပစ္စည်းများ ကြီးစိုးနေသော ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဈေးဝယ်စင်တာပေါင်းများစွာ ဖွင့်လှစ်ထားသော စီးတီးမတ်ဟိုးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်ရောင်းချမှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီဟု တရားဝင် မီဒီယာများတွင် ကြေညာပြီးနောက် ဈေးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သာကေတမြို့နယ်အတွင်းရှိ Premium Food Survice Products ကုမ္ပဏီပိုင် ဂိုဒေါင်မှ နိုင်ငံခြားမှလာသော ၀ိုင်ပုလင်းကိုးသောင်းနီးပါး၊ အရက်ပုလင်းတစ်ထောင်ကျော် ဖမ်းမိပြီးနောက် စီးတီးမတ်၊ အိုးရှင်းနှင့် စီးတီးအိတ်စပတ်ဆိုင်များတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်ရောင်းချခြင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရက တရားမ၀င်တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများပပျောက်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မထိရောက်သည့်အပြင် စားသုံးသူများအတွက် ဈေးကြီးပေးဝယ်ကာ မဆလခေတ်ကကဲ့သို့ မှောင်ခိုဈေးကွက်ကိုအားပေးသည့် အနေအထားမျိုး ပြန်လည်ဖြစ်စေသည်ဟု ဝေဖန်မှုများရှိလာခဲ့သည်။
“အဖမ်းအဆီးနဲ့ စပ်ကူးမတ်ကူးကာလဆိုတော့ ဈေးကွက်မှာပစ္စည်းပြတ်ပြီး ဈေးကြီးတာတွေ ဖြစ်မှာစိုးရတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဒေါက်တာစိုးထွန်းကပြောသည်။
နယ်စပ်နယ်နိမိတ်ရှည်လျားသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးရန် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှစ၍ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ထိ ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ အာဏာပိုင်များနှင့်နီးစပ်သည့် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသာ ကြီးပွားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော အစိုးရလက်ထက်တွင် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းကို အားပေးစေသည့် ကုန်သွယ်မှုကိုအတားအဆီးဖြစ်နေသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေလျှော့ပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကိုလည်း ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုများ တားဆီးရန်အတွက် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ကာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အကောက်ခွန်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကာ တရားမ၀င်တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများအား Mobile Team ဖွဲ့ကာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခုနစ်ဘီလီယံခန့် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုပမာဏလည်း ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံနီးပါး ရရှိလာခဲ့သည်။
အဓိကရောင်းချသူများကို ဖမ်းဆီးလိုက်သဖြင့် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များမှာ လတ်တလောဈေးတက်သွားသော်လည်း ရေရှည်တွင် အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါသည်ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ အကြံပေးဖြစ်သူ စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာမောင်အောင်ကပြောသည်။
၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တရားမ၀င်တင်သွင်းမှုများလွန်းနေခြင်း အရည်အသွေးပိုင်းစိတ်မချရခြင်းနှင့် မှန်မှန်ကန်ကန်တင်သွင်းနေသူများ ထိခိုက်ခြင်းနှင့် တရားမ၀င်တင်သွင်းသူများကြောင့် ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူများ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းတုိ့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာမောင်အောင်ကဆိုသည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖိတ်ခေါ်သည့်အနေဖြင့် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်ထုတ်လုပ်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများကိုလည်း ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာနာမည်ကြီး ဘီယာကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကလည်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်။
နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်မပြုဘဲ ဟိုတယ်လိုင်စင်ရရှိထားသူများကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည်။
ထို့အပြင် ယခင်အစိုးရနှင့်နီးစပ်ပြီး အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်(Duty Free) ရရှိထားသူများကိုလည်း အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက် တင်သွင်းခွင့်များပြုထားသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများက ကွန်တိန်နာလိုက်တင်သွင်းပြီး တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချပေးလျက် ရှိသည်။
အရက်၊ ဘီယာတင်သွင်းမှုကို တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အမိန့်ကြေညာစာတစ်ခုထုတ်၍ တားမြစ်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းအမိန့်စာမှာလည်း ဥပဒေကဲ့သို့ပင် ကျင့်သုံးလုပ်ကိုင်နေကြောင်း တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးရေးဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်အောင်ကရှင်းပြသည်။
“ဈေးတွေ၊ ဆိုင်တွေမှာ လိုက်ဖမ်းတာမျိုးကတော့ မလုပ်သင့်ဘူး။ သူတို့က တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးရောင်းသူတွေပဲ”ဟု မင်္ဂလာဈေးမှ အလှကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချသူတစ်ဦးကဆိုသည်။
“တိုင်တဲ့လူရှိရင် ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ လန့်နေရတယ်။ ဒီမှာ ရောင်းတာတွေ တိုက်ရိုက်သွင်းတာတွေရော၊ တစ်ဆင့်ခံဝယ်ရောင်းတာတွေရောဆိုတော့ မလွယ်ဘူး”ဟု မင်္ဂလာဈေးမှ အထည်ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးကပြောထားသည်။
တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဥပဒေအရ တရားမ၀င်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာပါက ပစ္စည်းကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းသည့်အပြင် တင်သွင်းသူကိုလည်း ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် ကျပ်ငါးသိန်းချမှတ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
“ဈေးကွက်အလိုကျဖြစ်တဲ့ ပေါ်လစီမျိုးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပြီ”ဟု ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဧဒင်ကုမ္ပဏီများအုပ်စု အကြီးအကဲဦးချစ်ခိုင်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ထိစပ်နေသည့် နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် မှောင်ခိုကုန်ကူးမှုတားဆီးရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျ မဟာဗျူဟာချမှတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးလှမောင်ကဆိုသည်။
လက်ရှိဖမ်းဆီးနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း “တားဆီးစစ်ဆေးတာတွေက သမာသမတ်ကျဖို့လိုတယ်။ စစ်တောင်းတွေဆိုရင်တော့ မထူးဘူး”ဟုလည်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က အကြံပြုပြောကြားသည်။
“အခုလိုဖမ်းတာက ကုန်ပစ္စည်းအတုတွေ ဖမ်းပေးတာဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒီလိုဖမ်းတာကြောင့် ပစ္စည်းဈေးတွေတက်လာတာ တွေ့ရတယ်”ဟု ရပ်ကွက်နေအမျိုးသမီးတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြုသည်။
လက်ရှိနိုင်ငံခြားဖြစ်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းတွင် အတုလုပ်သူများမှာ ဈေးကွက်အခိုင်အမာရှိနေပြီး အတုအပပစ္စည်းများ ပပျောက်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီးနေသောလုပ်ရပ်မှာ လက်တွေ့တွင် ခက်ခဲနေသေးကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
“သွင်းတဲ့လူကို အပြိုင်အဆိုင်သွင်းခိုင်းလိုက်ရင်တော့ တင်သွင်းသူ ပြန်ထိန်းခိုင်းရင်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စားအုံးဆီလုပ်သလိုမျိုးပေ့ါ။ အရည်အသွေးပါ ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်”ဟု ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
“အရင်တုန်းက ကားတွေနဲ့သယ်ကြတာ။ ခုတော့လူစီးကားတွေနဲ့ ပြောင်းသယ်လာကြတယ်”ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပြောသည်။
ရေးသားသူ- အောင်သူရ၊ ပြည်သိမ်း၊ သိမ့်သိမ့်စိုး
အလင်းရောင်ကောင်းစွာမရသည့် အခန်းအတွင်း ကျပ်နှစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်းခန့်တန်ဖိုးရှိသည့် တွင်ခုံကြီးများသည် ဖုန်အလိမ်းလိမ်းဖြင့် ငြိမ်သက်စွာတည်ရှိနေသည်။ တန်ဖိုးကြီးသော အရင်းအနှီးပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်ခန့်မှစ၍ ၎င်းတွင်ခုံကြီးများကို ကိုအောင်ဇေယျ ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတော့။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး စက်သုံးဆီများပေကျံနေခဲ့ပြီး ဆီဂျီး(ချေး) အထပ်ထပ်ညစ်ပေနေသည့် အ၀တ်အစားများဝတ်ကာ ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသည့် တွင်ခုံ၊ စက်မှုပညာများမှာလည်း ယခုအချိန်တွင် သူ့ဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက် သေချာသည့် အာမခံချက်မပေးတော့။ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသည့် ပညာ၊ ရှိသမျှအင်အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ထူထောင်ခဲ့ရသည့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ယခုအခါယိုင်နဲ့နဲ့သာ။ ပြိုလဲမသွားစေရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကျားကန်ထားရသည်ဟု ကိုအောင်ဇေယျကပြောသည်။
ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက ဦးလေးထံတွင် တွင်နှင့်စက်မှုလက်မှုပညာကို သင်ယူခဲ့ပြီး ကျောင်းပြီးချိန် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိသမျှအရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ကာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့သည်။ ပဉ္စရူပတွင်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် သံပန်းတံခါးလုပ်ငန်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဆင်ပြေအောင်မြင်စွာ ရပ်တည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပိုင်းများမှစတင်ကာ အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံက ၀င်ရောက်လာခဲ့သော စက်မှုထုတ်ကုန်များကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မှု အားနည်းလာခဲ့သည်ဟု ကိုအောင်ဇေယျကပြောသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးနှုန်းအချိုသာဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကို အများဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည့် အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ စက်မှုထုတ်ကုန်များက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမ၀င် ဒလဟောစတင်ရောက်လာသည့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း မန္တလေးစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်းအများစု ရပ်တန့်ပိတ်သိမ်းသွားစေခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင် နာလန်မထူတော့ပေ။
လက်ရှိအရပ်သားအစိုးရက အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေး ချေးငွေများထုတ်ပေးနေသည်ဆိုသော်လည်း အလုပ်မဖြစ်ဟု လုပ်ငန်းရှင်များကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ဈေးကွက်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာရရှိခဲ့ပြီး အင်အားကောင်းစွာဖြင့် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သော မန္တလေးစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ကွန်ပရက်ဆာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ရေခရုထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ကားခွေထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများသည် တရုတ်ထုတ်ကုန်များဝင်လာပြီးနောက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရပ်တန့်ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ရသည်ဟု မန္တလေးစက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
သုံးစွဲသူအကြိုက် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဈေးကွက်အတော်အသင့်ရရှိခဲ့သော်လည်း တရုတ်ပစ္စည်းများကို မယှဉ်နိုင်သည့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်ခန့်မှစတင်ကာ လုပ်ငန်းများရပ်နားခဲ့ရသည်ဟု မန္တလေးစက်မှုဇုန်တွင် ကွန်ပရက်ဆာ (Air Compressor) ထုတ်လုပ်သည့် ပွင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမှ ဦးခင်မောင်သန်းကပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှဝင်လာသော ကွန်ပရက်ဆာများမှာ ပေါ့ပါးလှပပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာသည့်အတွက် ဈေးကွက်အတွင်း မည်သို့မျှယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းရပ်နားခဲ့ရကြောင်း လုပ်သား ၁၃ ဦးခန့်ဖြင့် ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာ ကွန်ပရက်ဆာ (Air Compressor) ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ဦးခင်မောင်သန်းကပြောသည်။
“ဈေးက သုံးလုံး၊ တစ်လုံးလောက် ကွာနေတယ်။ နည်းပညာပိုင်းအရလည်း ဘယ်လိုမှမယှဉ်နိုင်ဘူး။ ဒီမှာသုံးနေတဲ့ စက်ကိရိယာတွေကလည်း ခေတ်မမီတော့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကလည်း လျှော့လို့မရဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ရပ်နားလိုက်ရတာပဲ”ဟု ဦးခင်မောင်သန်းကပြောသည်။
ပြည်တွင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ ကွန်ပရက်ဆာတစ်လုံးရရှိရန် ခုနစ်ရက်၊ ရှစ်ရက်ခန့် အချိန်ယူထုတ်လုပ်နေရချိန်တွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများသုံးကာ ဆယ်ရက်လျှင် အလုံးတစ်ရာခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်၍ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် မည်သို့မျှယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုမရှိဟုဆိုသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်အထိ မန္တလေးစက်မှုဇုန်တွင် ကွန်ပရက်ဆာထုတ်လုပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်း ၅၀ ခန့် ရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လုပ်ငန်းရပ်နားသွားခဲ့ရပြီဟု မန္တလေးစက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
ကွန်ပရက်ဆာလုပ်ငန်းများနည်းတူ ရေခရုထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ တွင်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် စက်ကိရိယာအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအများစုသည် တရုတ်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုမယှဉ်နိုင်သည့်အတွက် ရပ်နားပိတ်သိမ်းနေရခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးစက်မှုဇုန် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးစက်မှုဇုန်အတွင်း အသေးစားလုပ်ငန်း (၁၁၁၇)ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် စက်မှုဇုန်အတွင်း အသေးစားလုပ်ငန်း ၆၄၆ ခုသာ ကျန်ရှိတော့ပြီး လုပ်ငန်း ၄၀၀ ကျော်မှာ ရပ်နားပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးစက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ မှတ်တမ်းများ၌ ဖော်ပြထားသည်။
နှစ် ၂၀ အတွင်း မန္တလေးစက်မှုဇုန်မှ အသေးစားလုပ်ငန်း ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရပ်နားသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိလည်ပတ်နေသော လုပ်ငန်းအများစုမှာလည်း ယိုင်နဲ့နဲ့သာရှိပြီး အခြေအနေမကောင်းဟု မန္တလေးစက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးကပြောသည်။
တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် အိန္ဒိယကဲ့သို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ စက်မှုထုတ်ကုန်များ တရားဝင်နှင့် တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းများမှ ၀င်ရောက်လာနေပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရောင်းချနေရာ ပြည်တွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ များစွာထိခိုက်မှုရှိနေသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ပင် ထိခိုက်မှုရှိနေရာ ၂၀၁၅ အာဆီယံလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဧရိယာ (AFTA) ဖြစ်လာချိန်တွင် ပြည်တွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်မှာ အလွန်ခက်ခဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်တွင် တောင့်ခံရန်မဖြစ်နိုင်ဟု ဦးမောင်မောင်ဦးကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ရကာ ရောင်းအားကောင်းနေသော စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံကြီးများတွင် အရေအတွက်များစွာ ထုတ်လုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ တင်သွင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်ဟု မန္တလေးမြို့မှ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
၂၀၁၅ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အ၀န်း ဖြစ်လာချိန်တွင် ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အတားအဆီးမရှိ ၀င်လာမည်ဆိုလျှင် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်မှာ အလွန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ပဉ္စရူပတွင်နှင့် သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းမှ ကိုအောင်ဇေယျကပြောသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်း ဂရုစိုက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုနေပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ပြည်တွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒုသမ္မတဦးဆောင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီတွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယင်းဌာနမှ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းပညာ၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး စသည်တို့ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ယနေ့အချိန်ထိ ထိရောက်သော ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမှုများမရှိသေးဟု စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ငွေကျပ်သန်းတစ်သောင်း(၁၀ ဘီလီယံ)ကို အချိန်ကာလသုံးနှစ်၊ အတိုးနှုန်း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အလားအလာကောင်းမွန်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၆၂ ခုသို့ ချေးပေးထားသည်ဟု စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးဦးမျိုးအောင်က ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လက ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြောသည်။
ယင်းငွေချေးမှုသည် အမှန်တကယ်အရင်းအနှီးငွေလိုအပ်နေသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ငွေချေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ နီးစပ်ရာလူအား လက်သိပ်ထိုးချေးပေးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း မန္တလေးစက်မှုဇုန်မှ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များက ဝေဖန်ပြောကြားသည်။ ငွေကြေးများချေးပေးသည်ဆိုသည့်ကိစ္စကို သတင်းကြားသိရခြင်းပင်မရှိဘဲ မန္တလေးစက်မှုဇုန်မှ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမျှလည်း ချေးငွေရရှိခြင်းမရှိကြောင်း မန္တလေးစက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိအချိန်ထိ အသေးစားလုပ်ငန်း၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းနှင့် အကြီးစားလုပ်ငန်း မည်သို့ခွဲခြားမည်ဆိုသည်ကိုပင် တိကျသည့် သတ်မှတ်မှုမရှိသေးပေ။
လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေအရ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားတွင် လုပ်သားအရေအတွက် ၁၀ မှ ၇၀ ဦး အသုံးပြုပြီး အရင်းအနှီးထည့်ဝင် လည်ပတ်သုံးစွဲငွေ ကျပ်သန်း ၅၀၀ အောက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ၀န်ထမ်းအရေအတွက် ၁၀ မှ ၅၀ ဦးအထိ၊ အရင်းအနှီးထည့်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၂၀၀ အောက်ကို အသေးစားလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သားအရေအတွက် ၇၀ မှ ၁၅၀ ဦးထိ၊ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်သန်း ၁၀၀၀ အောက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်သား ၅၀ မှ ၁၀၀ ဦးအထိ၊ ရင်းနှီးငွေကျပ်သန်း ၅၀၀ အောက် လုပ်ငန်းများကို အလတ်စားစီးပွားရေးများဟု သတ်မှတ်သည်။
သို့သော် ၎င်းသတ်မှတ်မှုများသည် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတော့ကြောင်း၊ ထို့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပြီး မကြာမီကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသောင်းမြင့်က ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကပြောသည်။
၎င်းဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးလျှင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများသာမက ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ၊ အခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုပါ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ဥပဒေနှင့်အကျုံးဝင်စေရန် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေသစ်ကြောင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ နည်းပညာစသည့် အကူအညီများ ပိုမိုရရှိလာနိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလိုက်မီနိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသောင်းမြင့်ကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တည်ထောင်ထားသော စက်မှုဇုန်များရှိ လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ၉၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး ယင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထူးအလေးထားလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသည်ဟု အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်းက နိုဝင်ဘာလဆန်းက နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစည်းအဝေး၌ ပြောကြားထားသည်။
သို့သော် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ နည်းပညာ၊ ငွေကြေးအရင်းနှီး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ စက်ပစ္စည်းသစ်များ အလွယ်တကူတင်သွင်းခွင့်၊ အခွန်အကောက်လျှော့ချပေးရန် စသည့်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
“ဒီဘက်မှာတော့ အလူးအလိမ့်ခံနေရပြီ။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့လည်း အခြေအနေမကောင်းဘူး။ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ မူဝါဒစကားလုံးတွေသုံးပြီး အသံကောင်းဟစ်နေရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးသည် နိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါသလို နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူငယ်များ၏ အနာဂတ်အတွက်ပါ အလွန်အရေးပါသည်ဟု မန္တလေးစက်မှုဇုန်တွင် လုပ်သား ၆၀ ကျော်ဖြင့် ဆယ့်ငါးနှစ်ကျော်ကြာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သော စံချိန်မီစက်ကိရိယာတီထွင်မှုလုပ်ငန်းမှ ဦးနေ၀င်းကပြောသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရပ်တည်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်ပညာထက် ၀ပ်ရှော့၊ တွင်၊ သံဂဟေ၊ ၀ိုင်ယာရိန်းကဲ့သို့ စက်မှုလက်မှုပညာကို အထူးအလေးထားသင်ယူသော လူငယ်လူရွယ်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် များစွာရှိကြောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသများမှ ကျောင်းပညာပြီးဆုံးအောင် သင်ကြားနိုင်မှုမရှိသော လူငယ်များစွာသည် စက်မှုလက်မှုပညာများကို နှစ်ရှည်လများ ကြိုးစားသင်ယူပြီး ၎င်းတို့ဘ၀ကို လှပစွာတည်ဆောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြသည်ဟု ဦးနေ၀င်းကပြောသည်။
စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ယိုင်နဲ့ပြိုလဲသွားခြင်းသည် လူငယ်များနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ တီထွင်ကြံဆမှုကိုပါ ထိခိုက်မှုရှိစေသည်ဟု ဦးနေ၀င်းကဆိုသည်။
“စကားကြီးစကားကျယ်တော့ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ဒါကလည်း အမျိုးသားရေးပါ”ဟု ဦးနေ၀င်းကပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်လာနေသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မယှဉ်နိုင်၍ မန္တလေးစက်မှုဇုန်အတွင်းမှ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ရပ်နားသွားရာ ၀ပ်ရှော့၊ တွင်၊ သံဂဟေကဲ့သို့ စက်မှုလက်မှုပညာသင်ယူတတ်မြောက်ထားသူများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပွဲစား၊ ကားပွဲစား စသည့်ကြုံရာအလုပ်များကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေရမှုများရှိနေကြသည်။
ကျပ် ၂၆ သိန်းတန် တွင်ခုံကြီးသုံးလုံး တစ်ပြိုင်တည်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည့် အချိန်များ တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရေးမှာ ကိုအောင်ဇေယျအတွက် အိပ်မက်မျှသာ။ လက်တွေ့အခြေအနေရ ဖြစ်နိုင်ရန်အတော်ခက်ခဲနေပြီ။ ယခင်က တွင်ခုံဆရာများ၊ ပညာသင်များဖြင့် စည်စည်ကားကား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သော သူ့အလုပ်ရုံမှာ ယခုတော့ ခြောက်ကပ်ကပ်သာ။ ဖုန်အလိမ်းလိမ်းတက်နေသော တွင်ခုံကြီးများဘေးတွင် ကိုအောင်ဇေယျက အရည်ကျိုထုတ်လုပ်ထားသော သံထည်များကို တစ်ခုချင်းစီနေသည်။
“နိုင်ငံတော်အစိုးရကသာ ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကို တကယ်ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်။ လိုအပ်နေတာတွေ အမှန်တကယ် ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေကို ယှဉ်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်”ဟု ကိုအောင်ဇေယျက ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့်ပြောသည်။
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အုပ်ထားရုံနဲ့ ပုပ်ပွနေတာတွေက ရှင်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ၁၀ နှစ်အတွင်း အြ...
တရုတ်သို့ ရာသီချိန် သွားရောက်သော လုပ်သားများ လူကုန...
မင်းဘယ်လောက်ပညာတတ်လဲ၊ ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ ထောင်ဘူးဝမ...
ဗီဇာ ၄ နှစ်ပြည့် အလုပ်သမားများ ကြိုလုပ်ရန် မြန်မာသ...
လောကကြီးမှာ မရှိတာထက် မသိတာခက်
ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အလှူခံ...
သန်လျင်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် လူ(၁၀...
မနှစ်မြို့သည့် လူတစ်ယောက်၏ စရိုက်ကို သရုပ်ဆောင်ထား...
လက်ပြတ်ကို ခြေထောက်တွင် တွဲဆက်ပေးထားပြီးမှ မူလနေရာ...
အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းလည်း Facebook မြန်မြန်သုံးရန...
The Hot News weekly vol (4), No (171) (20-Dec-2013)
Netguide Journal vol (3), issue (15) (21-Dec-2013)
သိပ်ကိုညံ့တယ်လို့ ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ဘာကြောင့်ပြောလဲ
သမ္မတပြောခွင့်ရ ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ဗြောင်လိမ်တာလား
New Light of Myanmar သတင်းစာ (18-12-2013)
ပြိုင်ကားမောင်းသူတစ်ဦးက ရပ်ထားသည့် ကားကို ဖျက်ဆီး...
မိုးယံထက် လွင့်ပျံတက်လာသော ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ လက်ခုပ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ချော်ရည်လိုဏ် ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်...
ထိုင်းသွားမည့် မြန်မာလုပ်သား ၆,၀၀၀ ကျော် မြ၀တီတွင်...
အမျိုးသမီးဘောလုံး အကြိုဗိုလ်လုပွဲ လုံခြုံရေးတိုးမြ...
Planet Evening News Sheet (17-Dec-2103)
Techspace Journal ကွန်ပျူတာ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဂျာ...
မီးပုံးပျံမီးစာများ ပြုတ်ကျ၍ အင်းလေး ရေပေါ်ဘန်ဂလို ...
မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ဟု...
အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ပွဲ မတိုင်မီ အစည်းအဝေး၌ ပတ်ဆောင်...
နေပြည်တော်မှ တောင်သူလယ်သမားများ ဆင်းရဲနေသမျှ တိုင်...
ရခိုင်နဲ့ မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း...
ကုန်ပစ္စည်း ရှားပါးလာမှုကြောင့် စီးကရက်ဈေးနှုန်းများ ...
အမျိုးသား ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်
တစ်နေ့ချင်း သို့မဟုတ် တစ်လချင်း ငွေသွင်းစနစ်များဖြ...
ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ နံနက်စာ။ နံနက်စာအဖြစ် ...
အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် အခမဲ့ဝို...
ဘောလုံးပွဲပဋိပက္ခတွင် ထိန်းသိမ်းခံရသူများကို ဦးဇော်...
အိမ်ခြံမြေ ရုံးခန်း ငှားရမ်းခနှုန်းများ မြင့်တက်
ချင်းမိုင်က မြန်မာနေ့စားလုပ်သားရပ်ကွက်ကို ရဲဝင်ဖမ်း
လူအယောက် ၁၀၀ ကျော်ကို သူပုန်အဖွဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ဟု ဆီး...
ဘောလုံးပွဲအပြီး ပဋိပက္ခ နှိမ်နင်းမှုတွင် သတင်းထောက်မ...
ရဲတွေ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ မဟုတ်ရင် ဖုန်းဆက်တိုင်ကြားနိုင်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ဇန်န၀ါရီ ၇ ...